PMO ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအမျိုးသားများမှတင်ပြသောဇီဝကမ္မအကျိုးကျေးဇူးများ - Porn On Your Brain
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမှထွက်သွားသောအမျိုးသားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုထပ်ခါတလဲလဲအစီရင်ခံကြသည်။ YBOP သည်မဖြစ်နိုင်သည့်ထင်ရလောက်သောထိုအစီရင်ခံစာများကိုသူတို့၏ဖြစ်တည်မှုမှတ်တမ်းကိုစုဆောင်းသည်။ သတိပြုရန်မှာလူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၏သုတေသနပြုချက်ကသွေးကြော Testosterone level အပေါ်သိသာထင်ရှားသောရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုမရှိခြင်းသည်ညွှန်ပြသည်ကိုသတိပြုပါ။ ကြည့်ပါ - အော်ဂဇင်, abstinence နှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားမဆိုကွန်နက်ရှင်?။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် porn-စွဲခြင်း (hypothalamus ဆိုလိုသည်မှာ) ကဦးနှောက်ထဲမှာ neuro-endocrine ထိန်းချုပ်မှုစင်တာများပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းဦးနှောက်ပြောင်းလဲစေပါတယ်။
မြင် သူတို့ reboot အဖြစ်လူတွေဘယ်လိုအကျိုးရှိမြင်သနည်း အကြိုးခံစားခှငျ့၏အခြားမျိုးများအတွက်.
ဂိမ်း Disorder ရန်ကြောင့် secondary Immunodeficiency (2018)
ကောင်ကြောင့် NoFap မှ alternated လှပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ပါသလော
ဒီနှစ်မှာတော့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမကြည့်တော့တာကိုကြည့်ပြီးကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်သတိပြုမိသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားသာချက်များအပြင် (သင်သိသမျှအရာအားလုံးကိုသိထားသင့်သည်။ ၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ) ကျွန်ုပ်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုလည်းသတိပြုမိသည်။ အနည်းဆုံးတော့၎င်းသည်ပြောင်းလဲသွားသည်။
ငါ့ဆံပင် (ကအားလုံးကိုငါ့အကြိုက်ဆုံး, အရမ်းရယ်ရတယ်) sturdier ငါ၏အ3နေ့ကအမှိုက်မုတ်ဆိတ်ယခင်ကထက်ပိုပြီးသိပ်သည်းကြည့်, ငါ့ရင်ဘတ်ခက်ခဲခံစားရနှင့်ငါ့မေးရိုးလိုင်းကြည့် (နှင့်ခံစား), ပျော့ပြောင်းပြီးခံစားခြင်းနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းလှပါတယ်။
အခုတော့ NoFap ကကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကျွန်တော့်အတွက်ခွင့်မပြုစေချင်ဘူး။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်ဤခဏတာအတွင်းထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။ ငါဆိုလိုတာကအရိုးတည်ဆောက်ပုံကဒီလောက်မြန်မြန်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ပါးချိုင့်လေးကထွက်သွားပြီးပိုပြီးထိတွေ့တာကိုယုံဖို့ခက်တယ်။ Idk ။ ဒီတစ်ခါလည်းသူကငါမစိတ်ထဲမထားဘူးသောရလဒ်များအရအိပ်ယာ, ငါနေဆဲငါအရမ်းရယ်ရတယ် LOL ။
မည်သူမဆို Nofap အပေါ်အချို့သောအလေးချိန်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးပါသလား (Reddit အပေါ်ချည်)
5 ။ လိုက်တယ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများပျောက်ကွယ်သွား:
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မတ်လတုန်းကဆံပင်ကျွတ်တာကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ထိုအချိန်သည်ကျွန်ုပ်၏နား (မြည်သံ) ၌မြည်သံကိုစတင်ခံစားသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏ဘောလုံးများသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အမြဲနီးကပ်နေပြီးကျွန်ုပ်၏ flaccid ဒစ်၏အရွယ်အစားမှာလည်းအလွန်သေးငယ်သည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ပခုံးအထိကျယ်ပြန့်တဲ့ cne ပြproblemနာလည်းရှိခဲ့တယ်။
ဤပြproblemsနာများအားလုံးသည်ယခုအခါပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေပြီ။ Tinnitus သည်ယခင်ဖြစ်ခဲ့သည့်အရာ၏ ၂၀% အထိရှိသည်။ ဆံပင်ပြန်ပေါက်လာပြီ (ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းငါသွပ်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုယူသော်လည်း) ဝက်ခြံနှင့်ငါ့မျက်လုံးများမှပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါ့အသားအရေဟာနူးညံ့ပြီးနူးညံ့တယ်။
…ငါရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့ NoFap ကိုအပြားတစ်လုံးတည်းနဲ့နေပြီးရက်ပေါင်း ၅၀ အထိနေခဲ့တာပါ။ နေ့ ၅၀ လောက်မှာမနက်မှာငါအလှူငွေစပေးတယ်။ ကျွန်တော့်ဘောလုံးတွေကအနိမ့်ကျသွားပြီးပိုကြီးလာပြီးပိုပြည့်လာတယ်။ ငါသည်လည်းယခုကျပန်းဆုကြေးငွေရရှိပြီနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အများကြီးပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက် pumped ခံစားမိနေပါတယ်။ ငါ၏အ flaccid ဒစ်၏အရွယ်အစားသည် ၃ လက်မခန့်အထိကျယ်လာပြီးကျွန်ုပ်စိုက်ထူသည့်အထူသည် ၆ လက်မအထိထိသွားသည်။ ဒါကကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ NoFap ကိုစတင်သည့်အချိန်၌ငါသည်ညစ်ညမ်းသောဒစ်ကိုခံစားနေရသည်၊ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်မထိတွေ့ပါကချက်ချင်းခက်ခဲသွားနိုင်သည်။ နေ့ ၆၀ - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ
ငါ့အတွက်အစစ်အမှန် reboot လုပ်ခြင်းသည်ယခုလက်ရှိ Streak ၏ 200+ ရက်များအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ခိုင်မာတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်း။ နောက်ပြန်လှည့်နေသည့်ပြောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်အပြင်ရက်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်အတွင်းအရေခွံသည်အတော်လေးတိုးတက်လာသည်။ ဝက်ခြံပျောက်သွားသည် (ကျွန်ုပ်တစ်သက်လုံးလုံးရုန်းကန်နေခဲ့ရသည်)၊ ငါ၏သွားဖုံးများသည်သွေးထွက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်သွားများကိုသွားတိုင်းကျွန်ုပ်သွေးထွက်ခဲ့သည်)၊ (ငါတင်ပါး၊ ခြေထောက်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံဒူးထောက်ခြင်းကိုလုံးဝအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ) နာကျင်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကျောပေါ်နှင့်ပြင်းထန်သောဝေဒနာများသည်အစားအစာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ဆရာ ၀ န်နှင့်မည်သည့်ဆေးကိုမျှမတွေ့ဘဲနာကျင်မှုကိုရပ်တန့်စေခဲ့သည်။
ထိုပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပြီးသောအခါကျွန်ုပ်၏အသားအရေနှင့်မျက်လုံးများသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မတောက်ပပါ။ သို့သော်လူတို့သည်၎င်းကိုသတိပြုမိပြီးချီးမွမ်းကြသည် (ထိုအရောင်ကိုသတိပြုမိသောပထမဆုံးသူမှာကျွန်ုပ်၏မိခင်ဖြစ်သည်) နောက်ထပ်အားကောင်းတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကကျွန်မရဲ့အစာအိမ်ကုသခြင်း (ကြွက်တက်ခြင်းနှင့်ဖောင်းပွခြင်း) ။ ငါ့မှာအရေပြားပြproblemsနာတွေရှိလို့နို့၊ သကြား၊ အနို့အစားအစာစတာတွေစတဲ့ပြင်းထန်သောအဖုအပိန့်များထွက်လာနိုင်သည့်အချို့သောအစာများကိုရှောင်ရှားလိမ့်မည်။ အရေပြားရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း၊ အစာအိမ်နာကျင်ခြင်း၊ ငါ PMO ၏အပျော်အပါးနောက်ဆုံးတော့မည်သည့်ဂယက်ရိုက်စရာမလိုဘဲအစာကိုပျော်မွေ့နိုင်ခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုကုန်သွယ်သည်, ဒါကငါပြောလိမ့်မယ်လို့အံ့သြစရာကုန်သွယ်ရေးပါပဲ.
ဤအရာသည်အစပြုခဲ့သူများအတွက်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းနိုင်သော်လည်းသင်၏ Streak အပြောင်းအလဲများမပြပါကစိတ်မပျက်ပါနှင့်၊ တစ်ခါတစ်ရံပုံမှန်ရက် ၉၀ ထက်အနည်းငယ်ပိုကြာပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ရှည်ပါ။ ဒါနဲ့ဆံပင်ညှပ်ယူသွားလေ၏။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အမြင်မှလုံးဝသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာရေး
No Fap - အဲဒါကမင်းရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်စေပုံ (ကလူအစီရင်ခံစာ)
ငါဆယ်နှစ်ကျော်များအတွက်အမာခံ PMO စွဲခဲ့သည်။ ထိုအခါငါအမြဲတမ်းတစ်ဂျပိန်ဒစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုတော့သူဟာ girth မှာကြီးထွားလာတယ်။ နေ့တိုင်းပိုကြီးလာပြီဆိုတာငါခံစားရတယ်။ NoFap ကမမျှော်လင့်ထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းပျော်တယ်။ တီငါမျှော်လင့်မထားဘူးအကျိုးရှိ
Clear ကိုအသားအရေ (ယောက်ျားတွေဖြတ်ကနေအသားအရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်အတွက် Reddit ချည်)
သင့်ကိုယ်သင်မတိုပါစေနှင့်၊ ငါကဲ့သို့မဆုံးပါနှင့် ငယ်ငယ်တုန်းကအရေးကြီးတဲ့ testosterone ဟော်မုန်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တွင်မျက်နှာဆံပင် (ရင်ဘတ်မရှိ)၊ ခန္ဓာကိုယ်သေးသေးလေး၊ အာဒံ၏ပန်းသီးမရှိ၊ သေးငယ်တဲ့ pecker ။ ငါအထက်တန်းကျောင်းစဉ်အတွင်းနှင့်ပြီးနောက်ငါရှိခဲ့လိုသောအရာ။ ငါမိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောမယ့်အစား PMO နှင့်အတူကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။
ငါအသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီ။ အခုဆိုရင်ငါဟာနောက်ဆုံးတော့အတူတူရှည်လျားတဲ့အဝတ်အစားတွေချွတ်ပြီးမျက်နှာဆံပင်၊ ဝက်ခြံနည်းတာ၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့လေဖို့ကြိုးစားနေသည်ငါ့ငယ်ရွယ်ညီအစျကို
ငါ့ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဝက်ခြံဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်း nofap မတိုင်ခင်၊ အဲဒီနှစ်ခုဆီရောက်တဲ့အခါမှာအရာအားလုံးကိုငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အပြင်ဘက်သုခချမ်းသာအကြောင်းစဉ်းစားလို့ပဲ။ ငါ accutane ကို ၆ လကြာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်တစ်နှစ်အကြာမှာဝက်ခြံပြန်ရောက်လာတယ်။ ငါဟာစိတ်ဖိစီးမှုကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သာရာရအောင်နေ့စဉ်စိတ်ရောဂါခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်ဝက်ခြံကိုလျစ်လျူရှုခြင်းအားဖြင့်ဆံပင်မပျောက်အောင်ရှာနေသော်လည်းဘာပဲလုပ်လုပ်ဆက်လုပ်နေတုန်းပဲ။ နှစ်နှစ်အကြာ၊ လွန်ခဲ့သောရက် ၃၀ ကကဲ့သို့ငါ nofap ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝက်ခြံသည်ပျောက်ပြီးငါ့ဆံပင်များတဖြည်းဖြည်းပြန်လာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည် nofap ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒါဟာဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီးအဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အတွက်မီဒီယာတွေက fapping ကိုဘယ်လိုအားပေးသလဲဆိုတာရယ်စရာကောင်းပါတယ်။ PORN ကိုလူမှုစံနှုန်းအဖြစ်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး၊ အဆိုးဝါးဆုံးစွဲလမ်းမှုအဖြစ်မြင်နိုင်ပါတယ်။ porn သည်ကျွန်ုပ်တို့အားထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ PMO သည်ခုခံအားစနစ်ကိုသာမကစိတ်ကိုပါအားနည်းစေပြီးသက်သေပြလိုပါသလား။ ဒီ subreddit အပေါ်အသုံးပြုသူများပို့စ်များကိုဖတ်ပါ။ ငါမိုးသည်းထန်စွာ fapper အခါပြန်ကြည့်ခြင်း, ငါတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့သည်ငါ့ ဦး နှောက်ကိုအသုံးပြု။ မဟုတ်ရုံပစ္စည်းပစ္စယအမျိုးမျိုးမှာထပ်ခါထပ်ခါက jacking က fuck ဆိုတဲ့။ ဒါဟာငါ့ကိုမိုက်မဲနှင့်အားနည်းအောင်ခဲ့သည်။ ငါတို့ PMO နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့သည်ဆံပင်ကျွတ်ဆေးကို ၀ ယ်ရန်ကျွန်ပ်များဖြစ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းတွင်ဘုရားသခင်သိထားသည့်အရာ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ်“ ရေရှည် ED” ရှိပြီးသင်ရပ်လိုက်လျှင်၊ ဆံပင်ကျွတ်တာကပြန်လာတယ်။ ငါ့ကိုမင်းရဲ့လူစုထဲကနေကျွန်တွေထုတ်လွှတ်တာကိုပိုပြီးမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့နည်းကိုပြောပြပါ permalink
ငါ PMO ကိုပယ်9နှစ်နီးပါး။ အဲဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာ nofap နဲ့အတူသွားထွက်ခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာကျွန်မမကြာခဏဆီးခဲ့ကြပြီ။ လူတိုင်းကကျွန်မမှာဆီးအိမ်သေးသေးလေးရှိပြီးအချိန်ကာလအတော်ကြာကြာငါ့အိမ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်ရက် ၃၀ nofap သို့သွားပြီးမကြာခဏဆီးမသွားကြောင်းသတိပြုမိပြီးကျွန်ုပ်၏ဆီးကိုနာရီပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ fap မှာချိတ်နေတုန်းပဲကျွန်တော့်ရဲ့ဆီးကျိတ်ရောင်ရမ်းတာကိုတကယ်ပဲယုံကြည်တယ်။ ငါ့အသားအရေဟာအခုပျော့ပျောင်းလာပြီးငါ့အတွက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုလည်းမရှိတော့ဘူး။ [ဤဗီဒီယိုအောက်ရှိမှတ်ချက်များကိုကြည့်ပါ။ https://youtu.be/2Pg0uqLDHWA]
ကျွန်ုပ်သည်ရေချိုးခန်းမဟုတ်ဘဲဂန္တ ၀ င်စိုက်ပျိုးသူဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏လိင်တံစိုက်ထားသည့်အရွယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ flaccid လိင်တံသည်အာခေါင်အားလျော့နေသည်။ လိုပဲ 2.5 "-7.5" ။ ငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအားကစားရုံဘောင်းဘီတိုတွေ၊ အ ၀ တ်ခန်းခန်းတွေ၊ လိင်မတိုင်မီဒါမှမဟုတ်ပြီးနောက်စသည်တို့ကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါအမြဲတမ်းနာကျင်သောအကြောင်းအရာနှင့်အမြဲတမ်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
NoFap ကိုစပြီးတစ်လခန့်လောက်ကတည်းကစပြီးကျွန်ုပ်၏ flaccid လိင်တံသည်သေးငယ်သည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါ“ ရေပူပြီးတဲ့နောက်” ကြည့်လိုက်ပုံရသည်။ တစ်လက်မသို့မဟုတ်နှစ် flaccid အပိုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အခုတော့ငါဟာဟဟကိုဖုံးကွယ်စရာမလိုဘူးလို့ခံစားရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အရာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာကိုရပ်ပစ်လိုက်သလိုပဲ။ ငါစိုက်ပျိုးသူမဟုတ်ပါ။ NoFap ကကူညီခဲ့တယ်။
22 ရက်အကြာမှာဈမကျန် [ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ] လက္ခဏာတွေရှိပါတယ်သည်ဟုဆိုနိုငျသညျ။ နှစ်ပေါင်းဈ ED နှင့်ဆီးအိမ်ပြဿနာဆီးကျိတ်ကင်ဆာရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတစ်နေ့လျှင် 20-30 ကြိမ်ဆီးဖို့ရေချိုးခန်းကိုသွားမယ်လို့နှင့်ဈညဉ့် 3-4 ကြိမ်အတွင်းနှိုးလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင်ကိုယ့်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်များကအနည်းဆုံးငါ၏အမှု၌, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပေါ်စေ, သူတို့လိုခငျြသမြှကိုဆိုသညျကား, သင်မူးယစ်ဆေးဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေးနိုင်ပါသည်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပြီးနောက်ငါ၏အစအိုအပြည့်အဝခံစားရပြီးကိုယ့်ပေါက်ကွဲငါ့ကျယ်ဝန်းဆီးကျိတ်အဆင်သင့်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
PS ဈညအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာကိုယ့်ကိုလည်းအအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းလုပ်ပါ။ nofap နဲ့ငါ့ကိုအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ဆက်ဆံပါကကူညီပေးခဲ့ LINK
[မှတ်ချက်: အမှန်တကယ်ဆီးကျိတ်ပြဿနာများတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေချိတ်ဆက်ရှိပါတယ်သုတေသနဖြစ်ပါတယ်: https://www.reuniting.info/download/pdf/ကော်စတာ.တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ.pdf]
၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အထူးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သနည်း။ PMO စွဲသူသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ REM-sleep နှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာသောအိပ်မက်များသည်ကျန်းမာသော dopaminergic လှုပ်ရှားမှုလိုအပ်သည်။
ဘုရားရေ! 100% အထောက်အထား NoFap အလုပ်လုပ်! PMO စွဲသူတစ် ဦး သည်မည်သည့် REM အိပ်စက်ခြင်းကိုမှမရရှိနိုင်ပါ။
MY မျက်နှာပေါ်မှာနှင်းခူ သို့သှားကွ၏!!!!
nofap မီနှင့်အပြီးငါ့စကားသံတစ်အသံဖမ်း။ တစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းအသံအထောက်အထား
ငါ nofap စတင်ရှေ့၌ငါဖွင့်မယ့်အိမ်စာတာဝန်ကျတဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ် months ago ကအသံမှတ်စုတိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ လူတိုင်းပြောင်းလဲမှုများအပေါ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့လို့ယခု im သောအကြောင်းကို3လကြာ nofap လုပ်နေတာနဲ့ 30 ရက်ပေါင်းငါ၏အမြင့်ဆုံး Streak ရောက်ရှိပြီးနောက်ထက်, ငါငါ၏အသံကို rerecord ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီတော့ဒီမှာက .. ,
အဘယ်သူမျှမ FAP ခင်မှာ https://soundcloud.com/user375248061/before-30-days
အဘယ်သူမျှမ FAP 30 ရက်အကြာမှာ https://soundcloud.com/user375248061/after-30-days-1
…ငါနဲ့မဆိုင်တာရဲ့အဓိကအကျိုးကျေးဇူးကတော့ဝက်ခြံပျောက်ဆေးပဲ။ ဒီဆက်တိုက်ရှည်လျားသော streak ပြီးနောက်ငါ့မျက်နှာနီးပါးလုံးဝရှင်းပါတယ်! ဒီဟာက Accutane ကိုသွားတဲ့လူတစ်ယောက်ဆီကလာတာပဲ။
ဝက်ခြံ (အရေပြား) နှင့် NoFap (သင့်အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပါ)
အမြဲတမ်းဝက်ခြံနှင့်အတူဤနေရာတွင်ကိစ္စများရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ NoFap စတင်ခဲ့သည့်အခါငါသည်ကိုယ်အရေနေ့က 20 န်းကျင်အထိရှင်းလင်းရန်စတင်ခဲ့ပါကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စုံလင်သောဒါပေမယ့်ဖြစ်ခဲ့သည်ထက် သာ. ကောင်းသည်မဟုတ်။ ငါ (NoFap အားဖြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့သော) ကပိုရေနေ့စဉ်သောက်သုံးစတင်ခဲ့ပြီးကြောင့်တိုက်ရိုက်အားလုံး NoFap သို့မဟုတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်လျှင်သေချာမသိ။
ဒါကြောင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ, သွယ်ဝိုက်ဟုတ်ကဲ့ NoFap ငါ၏အဝက်ခြံတိုးတက်
အကျိုးကျေးဇူး 1: varicocele နာကျင်မှုမေ့လိုက်ပါ
varicoceles ကြောင့်ငါ့ဘောလုံးအမြဲနာနေတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုအများကြီးနှောင့်အယှက်။ ဒါပေမယ့်ငါ nofap စလုပ်တုန်းကတစ်ပါတ်အတွင်းမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ “ Yodelout” blog သည် varicocele နှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်ခဲ့သည်။ အသိအမှတ်မပြုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ရေကျောက်ရောဂါနှင့်ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနာကျင်မှု၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဘောလုံးထဲတွင်နာကျင်မှုမရှိသောအခါကျွန်ုပ်မည်သို့ခံစားရမည်ကိုသင်နားလည်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အရမ်းကြီးတယ် varicocele ၏စိမ်းပျောက်ကွယ်မထားဘူးသော်လည်း။ ရောင်ရမ်းခြင်းသည်အရင်ကဲ့သို့မကြီးမားပါ။ ငါစွန်းလိုက်တိုင်းနာကျင်မှုကပြန်လာတယ် ဤသည် edging နှင့် varicocele အလွန်ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းကြီးမားသောသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်နာကျင်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်၊
အကျိုးကျေးဇူး 2: ပါးစပ်သွားကြောင်း ulcers
ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲမှာအနာအမြဲရှိခဲ့တယ်။ တစ်ယောက်ကကုသလျှင်နောက်ရက်သည်နောက်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ငါ nofap စတဲ့အချိန်မှာအနာအကြိမ်ရေနည်းသွားတယ်။ အနာများသည်နာကျင်မှုနည်းပါးပြီးယခုအခါသူတို့ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေပြီ။ သူတို့ကငါ့ကိုနှောင့်ယှက်တော့ဘူး။
ထိုအကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းကိုသေချာဖြစ်ကြောင်းကိုအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်ကြသည်။ ငါရသေးအခြားမည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ပတ်သက်. သေချာမဖွစျ၏။ ကောင်းပြီ, ငါဒီရက်အချို့ပိုကောင်းမုတ်ဆိတ်ကြီးထွားလာနေပါတယ်ထင်ပါတယ်။ NoFap ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေတော်မူ၏။4လ Journey, 61 နေ့က Streak (စိုစွတ်သောအိပ်မက်၏ချွင်းချက်)
15 နေ့ရက်များမှာတော့ Fibromyalgia-type အမျိုးအစားရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့တင်းကျပ်စွာကြွက်သားတိုးတက်အောင်ခံရဖို့ပုံရသည်။
ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာယနေ့တိုင်အောင်မတူပါ။ ငါ၏အတင်းမာနေကြွက်သားများနှင့်လည်ပင်း / နောက်ကျောပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်လျော့နည်းခံစားရတယ်, ခေါင်းကိုက်ခြင်းလည်းလျော့နည်းတင်းမာနေခံစားရတယ်။ စွမ်းအင်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်ကိုလည်းသတိပြုမိသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းဒီနေ့အထိတိုးတက်မှုတစ်ခုသတိမပြုမိ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်ရက် ၃၀ nofap သွားခဲ့ပြီး“ အရင်ကထက်ပိုမိုအားနည်းလာသည်” ဟုခံစားခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်၏ fibromyalgia အမျိုးအစားလက္ခဏာများစတင်ကတည်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအရှိဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ လာမယ့်သီတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာရောဂါလက္ခဏာတွေဆက်ပြီးတိုးတက်နေ ဦး မယ်ဆိုတာမင်းတို့ယောက်ျားတွေကိုငါပြောပြမယ်။
30 fuck ဆိုတဲ့ရက်။
မကြာသေးမီကမှမထိတွေ့ခဲ့ပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တွင်ငြီးငွေ့ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့ကြောင့်အပြစ်ရှိသည်ဟူသောခံစားမှုအနည်းငယ်ရှိနိုင်ကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ခန့်ကကျွန်ုပ်တို့၌အပြစ်ရှိသည်။ ဤရောဂါကိုလုံးဝရပ်တန့်လိုက်ပြီးနောက်လုံးဝပျက်စီးသွားသည်။
ဟေ့ကောင်တွေမကြာသေးခင်ကမှဒီအတိုင်းလေးလေးနက်နက်စပြီးငါ ၁၂ နှစ်အရွယ်ကတည်းကငါ့အရှည်ဆုံးလေးကိုယူခဲ့တယ်။ ငါ့အဒမ်ပန်းသီးဟာပိုကြီးလာပြီ၊ နည်းလာပြီဆိုတာအရင်ကမသိခဲ့ဘူး။ ငါ့အသံလည်းနက်ရှိုင်းသည်။ ငါ့ကိုငါ ၂၂ နှစ်အရွယ်မှာရှိနေတုန်းပဲ။ အလားတူအဖြစ်အပျက်မျိုးကိုကြုံတွေ့ဖူးသူတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်သည်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုမျှော်လင့်နိုင်မလားငါ့ကိုသိပါစေ။ အဒမ်ပန်းသီး?
အဖြေ: အဲဒါဘာလဲဆိုတာမသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ nofap စကတည်းကကတည်းကအဲဒီလိုကြုံခဲ့ရတယ်။ permalink
ကျောရိုးနာကျင်မှုနဲ့ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒနာခံစားနေရတာတွေကို ၅ နှစ်နီးပါးခံစားခဲ့ရတယ်။ နံနက်တိုင်းနာကျင်မှုကိုနိုးထခဲ့တယ်။ များစွာသောဆေးဝါးများကမကူညီသော်လည်း၎င်းကိုသူ့ဟာသူအလိုအလျောက်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်နာကျင်မှုကိုထပ်မံခံစားခဲ့ရခြင်းမရှိပါ။
3 နှစ်ပေါင်းငါ့ဆံပင်ကဆြုံးကိစ္စကိုရပ်တန့်ပေမယ့်ဆံပင်အရည်အသွေးနှင့် texture တိုးတက်မသာ။ ပိုမိုမြန်ဆန်မျက်နှာဆံပင်တိုးတက်မှုနှင့်တိုးမြှင့်ရင်ဘတ်ဆံပင်။ Link- https://www.yourbrainonporn.com/age-31-252-days
အသက် ၂၇ - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိတော့ပါ။ ဒါ့အပြင်ဆီး pissing ပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အယိုလိမ့်မယ်။ မရှိတော့ပါ။
ယခုတွင်ငါသည်ငါ့ pee ရည်ရွယ်နိုင်ပါတယ်။ သန့်စင်ခန်းသုံးပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော့် urethra ကယိုယွင်းသွားတယ်၊ ပြီးတော့ငါဟာငါ့အတွင်းခံအဝတ်အစားကိုစွန်းထင်းစေမှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်တဖန်သုတ်ရန်မလိုတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်ရည်ရွယ်ချက်မရှိတော့ပါ။
ငါ၏အအူမကြီးပြဿနာတွေသိသိသာသာသော်လည်း nofap ကတည်းကတိုးတက်ပါပြီ။ ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်နေပါသည်! permalink
PMO Hairloss ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ (Nofap ၏အကျိုးကျေးဇူးများ)
ကျွန်တော် nofap အတွက်အသစ်မဟုတ်ပါ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂ လပတ်လမ်းလျှောက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန်အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတများလုံလောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်သူလျောက်ပတ်သောဆံပင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အလွန်လျောက်ပတ်သော, လိုပဲ။ (9th-10th တန်းမှ)
ထိုအခါ 11th တန်းနှင့်သူ၏ထော့နဲ့ porn စွဲလာ၏။ သူဟာအလွန်အမင်းစွဲတယ်မိမိပြဿနာကိုရှင်းပြ, ငါ့ကိုချဉ်းကပ်။ သူ horny အများကြီးခံစားရပြီးရလဒ်အဖြစ်သူမရပ်မနား faps ကပြောသည်။ နှင့်သူ၏ဆံပင်, သင်ကယုံကြည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူကဆံပင်တစ်တစ်တန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါသည်သူ၏ဦးရေပြားကတဆင့်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အလွယ်တကူသည်သူ၏ဦးရေပြားပေါ်ရှိကျန်ရှိနေသောဆံပင်ရေတွက်နိုင်ပါတယ်။ သူကသူ့သရဖူသည်, ဘုရားကျောင်း, သူ့ဦးခေါင်းအလယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်မကျန်ဆံပင်ခဲ့ legit ။
ငါသည်သူ၏ထော့နဲ့ porn စွဲအပြစ်တင်ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။
လူအများစုက“ uwuwuwu it baldness” လို့အစရှိသဖြင့်အရာများစတာတွေစတင်နိုင်ပါပြီ။
ငါနဲ့ဆင်တူတဲ့ဇာတ်လမ်းရှိတယ်။ ၉ တန်းမှာဆံပင်ပြည့်နေတယ်၊ ​​အများကြီးရိုက်တယ်၊ နောက်နှစ်မှာ M ပုံစံဆံပင်ပုံစံရှိတယ်ဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်။ ငါလုပ်ရင်တောင်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် fap လိမ့်မယ်။
အခုတော့ငါ ၂ လလောက်လမ်းလျှောက်နေရတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာပြီ၊ ဒါပေမယ့်အခုငါအဆင်ပြေသွားပြီ။ ငါ့ဆံပင်ပုံစံကကဲ့သို့ဆုတ်ယုတ်ခြင်းမရှိတော့သကဲ့သို့ငါသည်လည်းဆံပင်ကျခြင်းပြproblemနာမရှိတော့ပါ။ ငါ့ဆံပင်မှာအသံအတိုးအကျယ်ရှိတယ်။ ငါကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်။
2) သည် သာ. ကောင်း၏ကိုယ်ဟန်အနေအထား ( ပို. ယုံကြည်စိတ်ချမှုတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု) ။
သူတို့က nofap ကြောင့်အိပ်တယ်လို့ပြောသူတွေက bullshitting တွေပဲ။ သင်၏ဘောလုံးဖျော်ရည်ကိုရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာထိန်းထားခြင်းဖြင့်မိန်းကလေးများကိုသင်မရနိုင်ပါ။ သင်လုပ်နိုင်တာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတိုးလာပြီးမိန်းကလေးတွေကိုချဉ်းကပ်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်။ သင်၏ရက်ပေါင်း ၉၀ အပြီးသတ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါသူတို့သည်သင်၏ရင်ခွင်ပေါ်ထိုင်။ မလာကြပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဤအမှုသည်ငါ့ nofap အကောင့်နဲ့ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးပို့စ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငွိမျးခမျြးရေးကိုထုတ်။
NoFap ခြွင်းချက်အရွယ်အစား (6 လအတွင်း NoFap ပုံပြင်) ၏ဘောလုံးနှင့်ငါ့ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ထားပါတယ်
ငါ့မျက်နှာဆံပင်၏အသံပမာဏ၊ အထူနှင့်ကြီးထွားမှုအနည်းငယ်ကိုသတိပြုမိသည်။ အကြောင်းရင်းအချို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်လက်များ၊ လက်ကောက်ဝတ်များနှင့်လက်ဖျံများအတွက်၎င်းကိုသတိပြုမိသည်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ကသူဆံပင်တွေပြန်ကျောလာတာသတိပြုမိသည်။ သူဟာ NoFap မတိုင်ခင်ကတည်းကဒီဟာကိုတစ်ခါမှမရဖူးဘူး၊ သူဟာအသက် ၃၀ လောက်မှာရှိတယ်။ ... နှစ်ပတ်သုံးပတ်တိုင်းကျွန်ုပ်၏အသံသည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းသိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ ဒါဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့နှင့် bassy ဖြစ်လာသည်။ အရမ်းကောင်းတယ် ငါတကယ်သိပ္ပံကဒီနောက်ကွယ်ကဘာလဲဆိုတာတွေးမိ။ သွားသောသံသရာတစ်မျိုးမျိုးရှိပုံရသည်။ ... ငါအများကြီးပိုအိပ်မက်မက်။ တခါတရံကျွန်ုပ်သည်တစ်ညအိပ်မက်တွင်အိပ်မက် ၅ မျိုးနှင့်တူသည်။ NoFap မတိုင်ခင်ငါအိပ်မက်တောင်မက်ခဲ့တယ်။
. ငါပဲ, ငါ၏ဝက်ခြံများအတွက်နောက်ဆုံးရောဂါပျောက်ကင်းတွေ့ရှိခဲ့ထင်ပါတယ်။
ငါ့ဝက်ခြံအတွက်နောက်ဆုံးကုသနည်းကိုငါတွေ့ပြီထင်တယ် ဒါကြောင့် backstory အနည်းငယ်နဲ့စပါရစေ။ လွန်ခဲ့သော ၆-၉ လခန့်ကဤမွေးမြူရေးခြံရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်အားလပ်ရက်ခရီးထွက်ခဲ့ရသည်၊ ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်နေ့စဉ်သုံးခဲ့သည့် OTC ဆေးကိုသောက်သုံးတော့မည်မဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဝက်ခြံကိုစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ သင်၏မျက်နှာ)။ ၃ ရက်ကြာအားလပ်ရက်ကနေပြန်လာတဲ့အခါငါ့ဝက်ခြံလျော့လာတာသတိထားမိတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အစားအစာအပြောင်းအလဲကြောင့်ပဲလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။
အခုတော့တစ်ပါတ်အကြာန်းကျင်ငါ4နေ့ရက်ကာလအဘို့ Cancun ဖို့အားလပ်ရက်အပေါ်ငါသည်ငါ့ဝက်ခြံကုသရန်ဖို့ဆပ်ပြာကိုသုံးပါလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအချိန်သွား၏။ အားလပ်ရက်, ကိုကျော်ကာအားလုံးအချိန်အနိမ့်မှာငါ့အဝက်ခြံခဲ့အခါ။
ငါ့ရဲ့ဝက်ခြံကိုထိခိုက်စေတဲ့အချက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါအားလပ်ရက်မှာ carbs တွေများများစားစားစားခဲ့လို့အစားအသောက်မဟုတ်တာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးဘယ်တော့မှစိတ်ဖိစီးမှုမရှိသောကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုလည်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါဆိုဘာလဲ ၄ ရက်အတွင်းဘာကြောင့်ငါ့ဝက်ခြံပျောက်ကွယ်သွားတာလဲ။ ငါထွက်လာတဲ့အချိန်မှာငါဟာဖွင့်ဟချက်တစ်ခုလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒီခရီးစဉ်တွေထဲမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူး။ သူတို့ဟာငါအဲဒီကနေရရှိခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောအားလပ်ချိန်တွေပဲ။ တစ်ပတ်ကို ၅-၆ ကြိမ်လောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်
အထက်တန်းကျောင်းကတည်းကငါအလယ်အလတ်မကြာခဏခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အတူခံစားခဲ့ရသည်။ သူတို့သည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အချိန်များရှိရာ၊ ကျွန်ုပ်သည် Ibuprofen ကိုနေ့စဉ်ရက်သတ္တပတ်များစွာသောက်ခဲ့ရသည် (သင်၏ကျောက်ကပ်နှင့်သင့်ကျန်းမာရေး၏အခြားရှုထောင့်များအတွက်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်) ။ ငါဒီအုပ်စုထဲမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ပြီး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လလုံးလုံးဆေးမင်ကြောင်မနေမှီတိုင်အောင်ငါခေါင်းကိုက်ခြင်းများစွာကိုရပ်လိုက်တယ်။ မနေ့ကငါ“ ပြန်လာ” ပြီးခေါင်းကိုက်ပြန်ဖြစ်တဲ့အထိငါခေါင်းကိုက်တာဘယ်လောက်များလဲဆိုတာတကယ်တော့မေ့သွားတယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ဆက်လျှောက်ရန်နောက်ထပ်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်။
ငါ၏အအမြင်အာရုံ masturbating, အစွန်းရောက်ဒုစရိုက်ဖြေခဲ့ -7 မှ horrrrrible ဝက်ခြံကျဆင်းသွားနေစဉ်, ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း, ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ခန္ဓာကိုယ် PE ဖွံ့ဖြိုးပြီး, ငါတစ်အားလျော့စိတ်ကိုပြောနိုင်ပါတယ်။
ငါရှိသောကြောင့်ခရီးသွား၏ဤအဆင့်တွင်စဉ်အတွင်းမျှအင်တာနက်ကြောင့်အသက်အရွယ် 14 လုံးဝ3လကြာ porn ဖြတ်လေ၏။ ဤအချိန်အတောအတွင်း, ငါ့ဝက်ခြံကိုအလွန်တိုးတက်ကျွန်မပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
3 လအတွင်းနောက်ပိုင်းတွင် porn အပေါ်နဲ့ off, တဖန်စတင်ခဲ့သည်။ ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ် masturbate လိမ့်မယ်။ ဝက်ခြံဆိုးရွားစွာတက်အလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟု, အသက်ရှင်ခြင်းသည်ဤအချက်မှာကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်တဖန်ပေါ်နှင့်ငါ porn နှင့်အတူရုန်းကန်ချွတ်ငါလုပ်နေတာဘာသဘောပေါက်သေးအချိန်များတွင်ရပ်တန့်ဖို့မလုပ်နိုင်တာမှားခဲ့ပါတယ်။ အသက်အရွယ် 16 မှာငါ porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ငါ site ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါ, ငါပဲ 100% ဝင်။ အနည်းဆုံး ၃ လမျှ PMO မရှိပါ။ ဝက်ခြံဟာ ၆၀% လောက်ပိုများလာတယ်။ အများကြီးပိုကောင်းတဲ့အဆင့်တွေတက်လာတယ်၊ ကျွန်မရဲ့အတန်းထိပ်ကိုတက်လာတယ်၊ ကျွန်မရဲ့ဆရာတွေကအရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ မိန်းကလေးများသည် ၆ တန်းကတည်းကပထမ ဦး ဆုံးစိတ် ၀ င်စားသည်။
ထိုအခါငါမတော်တဆမှုအပေါ်အကြောင်းကို 90 ရက်မှာအရှုံးမပေး။ ကျွန်ုပ်၌ဤထူးဆန်းသောဖွံ့ဖြိုးမှုအလေ့အထရှိကြောင်းကိုကြည့်ပါ။ အိမ်၌တစ်ယောက်တည်းနေခဲ့တိုင်းအတိတ်ကာလကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်အိမ်မှာအချိန်အတော်ကြာနေခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာငါဟာအပြင်းထန်ဆုံးတွန်းလှန်နိုင်တဲ့တွန်းအားဖြစ်တယ်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်၌ပေးသောအခါပါပဲ။ ဝက်ခြံထွက်လာတယ်၊ အဲဒီနောက်ငါရှုပ်ထွေးတာနဲ့၊ တစ်ပတ်တည်းမှာပဲရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်သွားတတ်တယ်။
သီတင်း ၄ ပတ်မှ ၄ ပတ်အကြား PMO မရှိ၊ တစ်ပါတ်တွင် ၁-၃ PMO ဖြစ်ခြင်း၊ PMO ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုအတွင်းဆိုးရွားလာခြင်း၊
ထိုအခါငါအခြား / အခြားအရာများ, ငါ / ရှိခဲ့အခြားပြproblemsနာများကိုသတိပြုမိလာတယ်။ PMO ရက်သတ္တပတ် ၉၀% သည်ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီးကျွန်ုပ်အံ့သြမိသည်။ ဤအချိန်လောက်တွင်ကျွန်ုပ်မျက်လုံးချိန်းခြင်းခံခဲ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အမြင်အာရုံသည် ၇ မှ ၆.၅ သို့သွားသည်။ ငါဒီဟာရယ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာသိပေမယ့်အမှန်တရားပဲ ငါနောက်ဆုံးအကြိမ်သွားသောအခါ, က 90 မှတိုးတက်ခဲ့သည်
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်မှာကြက်ဆင်ကိုလုံးဝအအေးမိသွားတယ်။ ငါဖွင့်တယ်ဆိုရင်ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာရုံလိမ့်မယ်။ ဒါက ၉ လလောက်ရှိပြီ။ ဤတွင်ယခုအချိန်အထိပြောင်းလဲသွားတယ်အရာဖြစ်တယ်,
ဝက်ခြံနီးပါးနေရာတိုင်း (ဈကိုလည်းသော်လည်းသကြားလုံးနုတ်ထွက်) မှပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါသည်
ကျွန်တော့်အမြင်အာရုံအတော်လေးတိုးတက်လာ မနေ့ကနေ့လည်ခင်းမှာကျွန်တော်ဟာများသောအားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာမျက်မှန်မတပ်ထားဘူး၊ ဒီနေ့ငါ့ရဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကပိုကောင်းတယ်။
ငါတကယ်ကိုအကြီးအကျယ် fapping သို့ရဖို့စတင်သောအခါအကြောင်းကို 15 / 16 မှာမျက်မှန်ဝတ်ဆင်စတင်ခဲ့သည်။
NoFap varicocele နှင့်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်
ငါခဏပြန်သည်သူ၏ varicocele ရှည် NoFap Streak အပေါ်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့, ငါ့အဖြစ်ကိုကောင်းစွာငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုချင်သူကပြောပါတယ်သူအချို့ပြန်ဖွင့်ဆိုက် (အရာတစျခုသေချာမသိ), အပေါ်အချို့သောကောင်လေးအကြောင်းကိုဖတ်ပါ။
သင်မသိသောသူများအတွက်ရေကျောက်ရောဂါသည်အခြေခံအားဖြင့်သင်၏ (များသောအားဖြင့်ဘယ်ဘက်) ဝှေးစေ့သို့သွားသောသွေးပြန်ကြောကိုပုံမှန်မဟုတ်သောတိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အစွန်းရောက်သောဖြစ်ရပ်များတွင်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးမည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသင့်ဘောလုံးအားသွေးစီးဆင်းမှုကိုထိခိုက်စေသည်။ ၎င်းကိုအလွန်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေဟုမသတ်မှတ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ကသင့်ရဲ့ ၀ တ်မှုန်မှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အဖုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကင်ဆာရောဂါအကြောင်းချက်ချင်းစဉ်းစားလို့ပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တွင်၎င်းကိုအနည်းဆုံး (၁၃) နှစ်ခန့် (ဤအရာကိုကျွန်ုပ် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးသတိပြုမိပြီး) သည်မကြာမီကသိသိသာသာတိုးတက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုသေးငယ်သွားသည်မှာအသေအချာပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကထက်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ ၎င်းသည်ယခင်နေရာတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အချိန်နှင့်သိသာထင်ရှားသောအချိန်၌ပင် (သွေးထဲသို့သွင်းသောအခါ) ၎င်းသည်ယခင်ကထက်အများကြီးသေးငယ်သည်။
ငါ့ဘောလုံးတွေပေါ်မှာအထည်နဲ့ပတ်ထားတဲ့ရေခဲကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအသုံးပြုပြီးဒါကိုငါကုသခဲ့တယ်၊ ဒါကလည်းကောင်းကောင်းကူညီနိုင်ပေမဲ့ငါ NoFap မစခင်ကတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်ဆက်သွားဖို့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခု
အဘယ်သူမျှမပြောင်မဟုတ်တော့ဘူးကြည့်ပါ NoFap ကျွန်မရဲ့ဆံပင်သို့ပြန်သွားရန်ကြီးပြင်း!
ငါယောက်ျားအထီးခေါင်းပြောင်ရှိသည်။ ငါအသက် ၁၈ နှစ်မှာဆံပင်ကျွတ်တာ၊ အသက် ၂၃ နှစ်မှာ Propecia ကိုသွားခဲ့တယ်၊ ငါဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဆံပင်ကိုပြန်မဖြည့်တော့ဘဲဆံပင်ကျွတ်တာကိုရပ်လိုက်တယ်။ ၎င်း၏ထိရောက်မှုသည်အချိန်နှင့်အမျှအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါ 26 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ခဲ့ပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲကြည့်တဲ့ထိပ်ပြောင်မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့သည်ဦးရေပြားကိုကျော်ဆံပင်ပေမယ့်ပျံ့စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်။ လေတိုက်တကယ်ပဲငါ့ကိုငါ့ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုခံစားရဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါ nofap နှင့်အတူအပြည့်အဝအအေးကြက်ဆင် သွား.6လအကြာ, ငါသည်ငါ၏ဆံပင်ထူခဲ့တယ်နဲ့တူခံစားစတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်မခရီးစဉ်အပေါ် သွား. လေထန်, အရုတ်တရက်ကျွန်မဆံပင်ကိုလေ၌ရှိကောင်းတဲ့ခံစားခဲ့ရကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ ကြောင်းပြောင်သောခံစားမှုအဘယ်သူအားမျှ။
ဒါကြောင့်ဒီမနှစ်ကငါဆံပင်ကိုစစ်ဆေးပြီးဆံပင်မပေါက်မီငါလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ဆံပင်ပမာဏနီးပါးရှိတယ်။ အနည်းဆုံးအသွင်အပြင်၌။ ငါသည်ငါ့ဆံပင်၏ကောင်းသော 30% မှ 40% ကြီးပြင်းလို့ပြောလိမ့်မယ်
ငါ nofap ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အချက်အလက်ရှာဖွေနေပေမယ့်ဒဏ်ငွေမဟုတ်ပါဘူး။ သတိပြုရမည်မှာ Propecia သည် ၆ လမှ ၁ နှစ်အကြာတွင်၎င်း၏အပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသပြီးဆံပင်ကျွတ်ခြင်းသည်နှေးကွေးသောနှုန်းဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်းသတိပြုပါ။ ဒါကြောင့်ဒီ Propecia ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ငါ Propecia စတင်အပြည့်အဝ6နှစ်အပြီး nofap စတင်ခဲ့သည်။
… 5) သိသာထင်ရှားဆုံးသော (နှင့်မမျှော်လင့်သော) အကျိုးကျေးဇူးမှာကျွန်ုပ်၏ဆံပင်များပြန်လည်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောသုံးလကကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းနောက်ကျောတွင်အလွန်သိသာသောပြောင်သောနေရာကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး၊ လျင်မြန်စွာ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်မဆံပင်ကိုဖြတ်ပြီးတိုင်းဆံပင် ၁၀-၂၀ ခန့်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ အခုတော့ပြောင်ပြောင်တဲ့နေရာကိုတောင်မမြင်ရသေးဘူး၊ ဆံပင်ထိပ်ကပြန်ကျလာတဲ့ဆံပင်ဖြူလေးနည်းနည်းလောက်ကိုငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတယ်။ နောက်တဖန်ပြိုလဲထွက်ဆံပင်။ ဝိုး။ https://www.yourbrainonporn.com/age-10-several-benefits-most-importantly-i-discovered-root-problem
... ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းအင်၊ အသားအရေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးမျက်လုံးအောက်စက်ဝိုင်းများကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။
Gynecomastia (လူကို Boob) ချ calms?
ငါ mastrubate မပါလျှင် Gynecomastia (ကင်ဆာမဟုတ်သောလူ Boobs) စိတ်အေးသွားတယ်။ ဒါဟာကြင်နာ deflates နှင့်လျော့နည်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အပျိုဖော်ဝင်စအရွယ်၌ပါ ၀ င်သည် (ဤအရာသည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါသလား။ ၎င်းသည်ကြီးမားသည်။ သို့သော်ကြီးမားသော Boob ကဲ့သို့မဟုတ်ပါ) ။ သငျသညျအပျိုဖော်ဝင်နှင့်အတူပြုသောအမှုသောအခါသင်၌ရှိပါက, သင်အများဆုံးငါသိသည်အတိုင်း, ငါခွဲစိတ်ဖယ်ရှားပစ်ရရန်ရှိသည်။ အိုးနဲ့ဒါက“ ငါ့ကိုဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး” လို့ထင်တဲ့ဂျပိန်ကောင်တွေ။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ငါညာဘက်ရင်သားမှာတကယ့်ကိုခဲယဉ်းတဲ့ထုံးစံလိုတော်တော်ပိန်နေတဲ့အချိန်ကစတင်ခဲ့တယ်။ ငါဂျပိန်နေတုန်းပဲ ထို့ကြောင့် ImPrettyFlacko အမည်နှင့် gyno ရှိနေသေးသည်။ သင်၏အမျိုးသမီးဟော်မုန်းသည်သင်၏ testosterone ဟော်မုန်းထက်များလာသောအခါ၎င်းသည်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ တဖန်သင် mastrubate သောအခါအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုခန့်မှန်း။
ငါတိုးတက်လာသည်ဟုထင်သည်။ ဤတွင်ဤနေရာတွင် - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများမှာ ၁၄.၅ ပေါင်ကျဆင်းခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းပုံစံများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောမျက်စိထိန်းချုပ်မှု - အာရုံကြောမွှေနှောက်ခြင်း / လှည့်လည်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကိုယ်ဟန်အနေအထား၊ လူမှုရေးတိုးတက်မှုတွင် ၁၀ နှစ်အရွယ်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်ပိုမိုစကားပြောနိုင်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစိုက်ခြင်း၊ အလုပ်မှာစာမေးပွဲတော်တော်များများကိုပြီးစီးခဲ့တယ်၊ လေ့လာမှုလုပ်ဖို့အချိန်ပိုရခဲ့တယ်။ ဖြစ်ကောင်းအကြီးမားဆုံးတိုးတက်မှုအချက်, ငါထည့်သွင်းရန်မေ့လျော့နီးပါး, ငါတကယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြိုက်တယ်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်! LINK
ဖြတ်ကတည်းကကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အလေးအနက်မေးခွန်းတစ်ခုကို !!
ဓာတ်မတည်, အစာအိမ်ပြဿနာများကို (GERD စသည်တို့), လူတယောက်အတိုင်းအတာအထိ psoriasis, ငါ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနေ့စဉ် PMO ရထားချွတ်ရတဲ့ကတည်းကလည်းညှိုးနွမ်းဖို့စတင်ခဲ့သည်။
ငါသေချာမသိဘူး၊ ငါ့အစာအိမ်တိုးတက်နေရဲ့လားဆိုတာငါသိတယ်။ ငါမှာ FODMAP ကိုအလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်သောစိတ်ရှိခဲ့ပြီ။ nofap သည်ဤတွင်ယောက်ျားများကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းရှိမရှိမသေချာပေ။
ကနျြးမာရေးတိုးတကျမှုမြား: ငါ hemorroids ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ဘယ်အရာကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါက hemorroids ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါငါမသိခဲ့ပါဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုများအတွက်ဆရာဝန်ကိုသွားလည်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မဖတ်ပါအဘယ်အရာကိုမှ၎င်း, နီးပါး2နှစ်ပေါင်းခံစားခဲ့ရ, လုံလောက်အောင်ယားယံစေကနောက်ဆုံးလအနည်းငယ်နှင့်မှာငါ့ကိုနှိုးဖို့လည်းမီးလောင် ညဥ့်။ ငါအနည်းဆုံးပြီးခဲ့သည့် 10 နှစ်ပေါင်းမနက်တိုင်းမျက်စိ boogers နှင့်အတူနိုးထဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါအမြဲစနစ်တကျသူတို့ကိုထသန့်စင်ပင်သော်လည်း, ငါ့မျက်ကပ်မှန်ဖို့ဒီ attribute လေ့ရှိတယ်။ ဤရွေ့ကား2သောအရာတို့ကိုလုံးဝသွားကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ ငါသူတို့ကပထမဦးဆုံးလတစ်လဝန်းကျင်မှာရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပြီးကတည်းကပြန်လာ havent ကြောင့်ထိုသို့ nofap နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ငါသိ၏။ အကြှနျုပျ၏မှန်းဆသည်ဤအမှုအရာနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ဖိစီးမှုခဲ့ကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ (POS မှ link ကိုt)
ငါကြက်တောင် nofap ကတည်းကကြီးထွားလာတာသေချာပါတယ်
ကျွန်ုပ်သည်ရက် ၇၀ ရှိပါပြီ။ Talkin length နှင့် girth၊ ယောက်ျားလေးများကိုပင်နောက်နေခြင်းမဟုတ်ပါ
မပြောရသေးလား၊ ငါ့အမှားဒီကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့တာကိုငါမမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒါကိုတကယ့်ကိုခမ်းနားထည်ဝါစွာမမြင်ဖူးဘူး။ ဒီသေခြင်းချုပ်ကိုင်ငါ့ကိုအဘယ်သို့ပြု? ငါ့ရဲ့အစွမ်းအစကိုငါ့ကိုလုယူလိုက်သလား။ သူငယ်မပြန်ဘူး။
ငါအသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးအသက် ၁၈ နှစ်မှာရပ်တန့်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မမှာကျန်းမာရေးပြseveralနာအတော်များများရှိခဲ့ဖူးတယ်။ - ကူးစက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ဆံပင်ကျခြင်း (အဖေလည်းပြောင်နေတဲ့မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်လို့ထင်တယ်)၊ ဝက်ခြံ (မျက်နှာနဲ့နောက်ဖက်) , ရန်လိုအပြုအမူများနှင့်လိုက်တယ် incest fetish ။ ငါဝက်ခြံအတွက်အရေပြားဆရာဝန်နှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်းသူ၏ဆေးဝါးများမှမည်သည့်ရလဒ်မျှမရရှိခဲ့ပါ။ ငါ nofap ကိုမိတ်ဆက်ပြီး ၇ ရက်ကြာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရသောအခါကျွန်ုပ်သည်တိုးတက်မှုအချို့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
ငါ3ရက်အကြာတွင်ကြောင်းစိန်ခေါ်မှုပျက်ကွက်ပေမယ့်ကိုယ့်လေးနက်သောတိုးတက်မှုများကိုမြင်တော်မူ၏။ ထိုအခါငါအလေးအနက်ထားဒီ ယူ. ဤသို့ပြုရပ်တန့်ပါကကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးရွားသောတိုးတက်မှုအတွက်ရလဒ်။ ပျောက်ကွယ်ငါ့အဝက်ခြံ, hairfall လျှော့ချခဲ့သည်တယ်ငါ့ကုန်သည်ဆံပင်လိုင်းပေါ်တွင်သစ်အချို့ကလေးဆံပင်ကိုမွငျလြှငျ, ငါ့ဘောက်ပြောင်ခဲ့, ငါ့နောက်ကျောဝက်ခြံလုံးဝသွား၏။ ငါ့အရေ texture ပညာနှင့်လူများစွာကဤအပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. ငါ့ကိုချီးမွမ်းယခုငါပိုပြီးကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဘာသာစကားများမပြောတတ်နှင့်ပိုပြီးလျှင်မြန်စွာစဉ်းစားနိုင်တိုးတက်တယ်။ https://www.yourbrainonporn.com/age-18-incest-fetish-gone-serious-health-improvements
NoFap ငါ၏အ varicocele ပျောက်ကင်းအောင်ကုသကြပေမည်
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည် ၆၈ ရက်တာကာလတွင်ရှိပြီးအခြားသူများကဒီမှာပြောခဲ့သောကောင်းကျိုးများကိုသတိပြုမိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုတာကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီလို့ထင်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်၏ရေမွှေးသည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပါသည်
အကယ်၍ varicocele ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသင်မသိရင်၊ ၎င်းသည်သင်၏ဝှေးစေ့တစ် ဦး အထက်တွင်ကျယ်ပြန့်တဲ့သွေးပြန်ကြောအစုအဝေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် (ဘယ်ဘက်ဝှေးစေ့အသုံးအများဆုံး) ။ သွေးများသည်စနစ်တကျစီးဆင်းခြင်းမရှိဘဲသွေးပြန်ကြောများသွေးဖြည့ ်၍ သွေးဖြည့်တင်းစေသည်။ ၎င်းသည်တီကောင်အိတ်တစ်ခုကဲ့သို့ခံစားရသည်၊ သင်၏ဘောလုံးကိုအခါအားလျော်စွာနာကျင်စေသည်။ ရေမွှေးရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုးဝါးဆုံးအရာမှာ၎င်းသည်လုံလောက်သောပမာဏရှိပါက၎င်းသည်ယောက်ျားမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒီ Streak မစတင်မီ varicocele ဟာကျွန်မရဲ့အရေပြားမှတဆင့်မြင်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားပြီးအချို့သည်သင်မမြင်နိုင်လောက်အောင်သေးငယ်သည်။ ငါ၏အ Streak တိုးတက်သကဲ့သို့ငါတကယ်ယနေ့ညတိုင်အောင်, ငါ့ varicocele အများကြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေး၏ဘူး။ အခုငါလုံးဝနီးပါးသွားပြီဆိုတာကိုအခုငါသဘောပေါက်ပြီ ပျောက်ကွယ်သွားပြီ
ငါမစတင်မီကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမျှမကြော်ငြာကြောင်း၊ မည်သည့်ဘာသာရေးနှင့်ဒphilosophနိကဗေဒနှင့်မှမပတ်သက်ကြောင်းပြောချင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သာကူညီခြင်းနှင့်အလားတူအရာတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားနေသူတစ် ဦး ထံမှထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရှိခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအထက်တန်းကျောင်းစာစီစာကုံး မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်၏စာအရေးအသားကိုခွင့်လွှတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤမျှကြာမြင့်စွာရေးသားထားခြင်းတစ်စုံတစ်ရာမပြုလုပ်ခဲ့ပါ
ဒါကြောင့်ငါ့နောက်ခံ (ပုံမှန်ဆိုရင်၊ မင်းလိုချင်မယ်ဆိုရင် skip) ... ငါနေသမျှကာလပတ်လုံးငါမှတ်မိနိုင်သကဲ့သို့ HH ခံစားနေရသူပါ။ ချွေးစေးစသည့်စွန်ပလွံပင်များကိုပထမဆုံးမှတ်ဉာဏ်သည်အသက် ၅ နှစ်သို့ပြန်သွားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမုန်းတီးသောကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးများနှင့်လက်များမကိုင်နိုင်ပါ၊ စုဆောင်းကြည့်ရှုစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းငါးယောက်ကိုမချီးမြှောက်နိုင်ပါ။ အထက်တန်းကျောင်းကဒီမိန်းကလေးကိုကျွန်တော်သတိရတယ်။ ငါတို့ကြင်ကြင်နာနာအနီးကပ်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ သူမဟာလက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြခဲ့ပြီးသင်္ချာအတန်း (ကျွန်တော်အတူတူထိုင်လေ့ရှိတယ်) ခေတ္တစက္ကန့်လောက်အကြာမှမထွက်ခင်သူမကငါနဲ့ဘယ်တော့မှစကားမပြောတော့ဘူး။ ငါဒီတစ်ခုလုံးကိုတစ်သက်လုံးဒီလိုမျိုးပြုကျင့်ခဲ့ရတယ်။
ငါလူ့အဖွဲ့အစည်းကနေဝေးသော့ခတ်, လူတွေကိုရှောင်ရှားတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါအွန်လိုင်း (ပရိုဂရမ်မာ) အလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဘယ်သူ့ကိုမှမတွေ့ခဲ့ဘူး။ ငါအထီးကျန်ရွေးချယ်ပါ။ ငါသည်လည်းအများကြီး masturbating စတင်ခဲ့သည်။ ငါပြောနေတာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်၊ တစ်ခါတလေ ၅ ကြိမ်ကနေ ၆ ကြိမ်ပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါယခု 23 ဖြစ်၏။ အခုထိငါ hyperhidrosis လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမယ့်အချိန်တွေ (၂-၃ ရက်၊ ၂ ရက်၊ အများဆုံးတစ်ပတ်) ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီ variable ကဘာလဲ၊ ငါပျောက်နေတာကိုသံနဲ့ရိုက်လို့မရဘူး။
လွန်ခဲ့သော ၂ လကကျွန်ုပ်အမေသည်နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ထံလာလည်သည်။ ပထမအပတ်မှာ၊ ကျွန်ုပ်၏ hyperhidrosis သည်ပုံမှန်အတိုင်းသာဖြစ်ခဲ့သည်၊ သို့သော် ၂ ပတ်အစတွင်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါသုညချွေးပြောနေတာပါ။ ဒါကကျွန်တော့်ဘဝပုံစံအပြောင်းအလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ဘာလဲဆိုတာမသိဘူး။ ငါ့အမေကသူမလာကတည်းက (ငါအမြဲတမ်းပေးပို့, ချက်ပြုတ်ဘယ်တော့မှ) ငါ့အဘို့ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်။ ငါကြောင့်ကြောင့်ထင်ခဲ့တယ်။ သူသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်အမွှေးအကြိုင်အချို့အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ဆားသို့မဟုတ်ရှလကာရည်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါသူမအစာတိုင်းချက်ပြုတ်ပုံကိုသူမအားမေးမြန်းခဲ့ပြီး၎င်းကိုချရေးခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့အပြissueနာဖြစ်ခဲ့သည်အစားအစာဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူမထွက်သွားပြီးနောက်သူမပြောပြသည့်အတိုင်းသူမပြန်သွားသည့်အတိုင်းကျွန်မချက်ပြုတ်ခဲ့သည်။ သူမထွက်ခွာသွားပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏အိမ်သည် FULL FORCE သို့ပြန်လာခဲ့သည်။ ငါသူမဒီမှာရှိနေတုန်းသူချက်ပြုတ်တာကိုအတိအကျစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာမှမထူးခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဖြစ်စေငါ့ရဲ့အိမ်ကိုပျောက်သွားစေတဲ့ voodoo 'mom's aura' ဒါမှမဟုတ်ငါပျောက်နေတဲ့အခြားအချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်။
ငါဒီကိစ္စကိုသံုးစွဲခဲ့တာပါ။ လွန်ခဲ့သော ၄ ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်အဘိုးအဘွားများထံလည်ပတ်ရန်အာရှသို့သွားခဲ့သည်။ နောက်တစ်ပတ်အကြာမှာကျွန်တော့်ရဲ့ချွေးတွေပျောက်သွားတယ်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာ ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၌အိမ်မရှိ၊ (ကျွန်ုပ်၏ကနေဒါ၊ ကနေဒါရှိ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဒီဂရီချိုးသည်) ဆိုလိုတာကသာမန်လူတွေလိုချွေးထွက်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့် HH ချွေးတော့မဟုတ်ဘူး။ အလွန်အကျွံစွန်ပလွံသို့မဟုတ်ခြေချွေးမ။
ဒါကြောင့်ငါကစဉ်းစားစောင့်ရှောက်လျှင်, နောက်ဆုံးတော့ငါသဘောပေါက်ဆီသို့ရောက် လာ. , ငါ masturbating ရပ်တန့်မိသောကြောင့်, ငါ၏နာရီသွားပြီခဲ့သည်။ ငါ့အမေငါ masturbating ရပ်တန့်, ငါ့ကိုသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာသင်, ကြည့်ရှုပါ။ ငါအာရှသွားသောအခါလည်း, ငါသည် masturbating ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ masturbating ထံမှပျမ်းမျှ,3ကြိမ်နေ့၌ငါရုတ်တရက်အပေါငျးတို့သ0ထံသို့သွားလေ၏။ ဤသည်နှစ်ဦးစလုံးအခါသမယပေါ်တွင်သာဘုံပိုင်းခြေဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းငါ၏အနာရီလုံးဝသွားပြီခဲ့သည်ရှိရာကြိမ်ပြန်ကြည့်ရှုသောအခါ, ငါခရီးသွားလာသို့မဟုတ်သောအခါငါတပတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဘို့တစ်စုံတစ်ဦးကကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေသည့်အခါနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်။ ဒါဟာအားလုံးငါ့ထံသို့အသိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဒါကြောင့်ကနေဒါကိုပြန်လာပြီးကျွန်မရဲ့အယူအဆကိုစမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါပြန်ရောက်လာသောအခါငါ၌နာရီမရှိ။ ငါသာမန်အားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါမှန်တယ်: ငါ၏အ HH ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အိမ်သို့ပြန်လာပြီးသည်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်။ ၈ ရက်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော့်အိမ်ဟာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ထိုအခါငါကဒီမှာယခုရောက်ရှိနေ, ဤစာရိုက်, လုံးဝချွေးအခမဲ့။ ကျွန်ုပ်၏အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကိုမည်သို့ကုသနိုင်ခဲ့သနည်း (Palmer, planter, underarms)
ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင့် ဦး နှောက်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဆင်တူသည်။ အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကကွင်းဆက်ဓာတ်ပြုခြင်းကိုဖြစ်စေပြီး dopamine ပမာဏမြင့်မားစေသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ endocrine နှင့် sympathetic nervous system ကိုဖိစီးမှုကြောင့်ချွေးအလွန်များစေသည်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကဤဆိုးကျိုးများကိုပြောင်းလဲပြီးသင့် ဦး နှောက်ကိုမူလအခြေအနေသို့ပြန်ရောက်စေနိုင်သည်။
ဒါက [သည့် [စာအုပ်] ငါထင်သင့်အားအစွမ်းကုန်ဆက်စပ်မှု၏ဖြစ်ပါတယ်အဘယ်သို့ငါချွေးရပ်တန့်] သူနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပေးသည်အကြံဉာဏ်ကို၏ 2nd အပိုင်းအစကိုဖတ်ရှု; ကအချက်ရန်အလွန်စုံစုံနှင့်ဖြောင့်သည်, သုတ်ရည်လွှတ်မှရှောင်မည်ကဲ့သို့သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကသူ့နာရီကိစ္စများကုသကူညီပေးခဲ့သပေးသည်။ ထို့အပြင်သူသည်ကောင်းသောကိုးကားပေးသည်။ (သင် PDF ကို download လုပ်ပါမှရလိမ့်မည်) https://www.smashwords.com/books/view/159856
၁၉ နှစ် - NoFap နဲ့ငါ့စမ်းသပ်ချက်။ အဲဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်။
ဝက်ခြံဆိုးနေတယ် ငါ့မျက်နှာတပြင်လုံးကိုလိုပဲနှင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ fap မရှိ ၂ လကြာပြီးနောက်၎င်းသည် ၉၀% ကိုရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ငါ့မှာအမာရွတ်တွေရှိနေပြီ၊ ငါဒါပေမယ့် ၂ လအကြာမှာပြန်လာတဲ့အခါဝက်ခြံအနည်းငယ်ပြန်ရတယ်။ ယခုငါပြန်ပေါ်လာပြီ၊ ငါ့အသားအရေကိုကြည်လင်လာပြီ။ ငါကိစ္စတော်တော်များများမှာဝက်ခြံဟာတိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်နေတယ်ဆိုတာ 2% သေချာပါတယ်။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/90iris/acne_just_vanished/cq2zavz
ငါ့မျက်လုံးတွေမယုံနိုင်ဘူး !!!! ငါနောက်ဆုံး4ပတ်နေ့စဉ်အနည်းဆုံး 14 နာရီလေ့လာနေခဲ့သည်! ငါမရိတ်ဖူးဘူး၊ ငါမှန်ထဲမှာကြည့်ဖို့အချိန်တောင်မရှိဘူး။ ငါ fap တောင်မှမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါကအခြေခံအားဖြင့် NoFap ကိုစခဲ့တာပါ။ အချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှစာမေးပွဲပြီးတဲ့အခါငါမှန်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ ငါ့မျက်လုံးတွေမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ လောလောဆယ်ငါ2နှစ်ကတည်းက rom hairloss ခံစားနေရတယ်။ ငါကအခြားသူတွေလိုပဲနေ့တိုင်း၊ ဒုတိယနေ့မှာ ၂-၃ ကြိမ်မမှန်တော့ဘူး။ ငါ့ဆံပင်တွေဖြည်းဖြည်းချင်းစီးလာတယ်၊ ငါပြောင်တဲ့နေရာတွေသတိထားမိပြီးအဲဒီအချိန်ကတည်းကစပြီးဖုံးအုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီရက်သတ္တပတ်လေးပတ်ကြာတဲ့နောက် NoFap ပြီးနောက်ငါမှန်ထဲမှာတွေ့ခဲ့တာကိုမယုံနိုင်ဘူး။ ငါ့ဆံပင်တွေကလုံးဝပြန်ကောင်းလာပြီ၊ ငါ့ဆံပင်သိပ်သည်းဆကလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကလိုပဲ။ ငါအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်၊ စပြီးငိုတော့တာပဲ။ ငါ့ဆံပင်ကသက်သေပြနိုင်အောင်ထပ်မံစမ်းသပ်ရန်စဉ်းစားနေသည်။ ပြီးတော့နောက်တဖန်သွန်း .. နောက်မှငါကပြန်လည်လိမ့်မယ်သက်သေပြမှနောက်တဖန် NoFap ငါပါလိမ့်မယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကိုခင်ဗျားယောက်ျားတွေဘယ်လိုထင်သလဲ။ ငါပုံမပေါ်မီနှင့်အပြီးယူနိုင်ပါတယ် .. ငါကဒီလူအကြောင်းကိုအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ငါ Ogg ဒါအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ခံစားရတယ်
တစ်ဦးက 20 နှစ်အရွယ် nofap ၏ 60 ရက်ပေါင်းကျော်တော်အသံကိုမှတ်တမ်းတင်:
https://soundcloud.com/user-112694319 / အစုံ / NoFap-voice-ပြောင်းလဲမှု-60-ရက်ပေါင်း
NoFap ၏ 87 ရက်, ရလဒ် !!
ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ပိုထူလာပြီးပိုရှည်လာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ယခင်ကထက်နှစ်ဆပိုထူလာပြီး ၅၀% နီးပါးပိုရှည်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒါကသိပ္ပံနည်းကျမဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ငါသေချာပေါက်ခံစားရတယ်။
အကြှနျုပျ၏လိင်တံအစွန်းရောက်အထိခိုက်မခံဖြစ်လာခဲ့ပြီး, အရေပြားကတ္တီပါကဲ့သို့ဖြစ်လေပြီ, ငါ့လိင်တံပေါ်မဆိုထိတွေ့ငါ၏အကျောရိုးထဲမှာ tingling အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးတော်မူ၏နဲ့ကျွန်မ horny ခံစားရရန်စတင်
ငါနေဆဲအမျိုးသမီးတွေသို့မဟုတ်လိင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်စိုက်ထူမရကြဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုငါ၏အလိင်တံကိုထိတစ်ကြိမ်, ဈ 70-80% စိုက်ထူရ။
Nofap hairloss မှ = ရှင်းလင်းစွာအဖြေ။
ဤအကြောင်းအရာသည်အကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာတင်ထားခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်ဤအရာကိုငါပြောရန်လိုသည်။ ငါဆံပင်ဆုံးရှုံးမှု / ပါးလွှာသောဆံပင် 10+ yrs ကျော်ခံစားနေရပြီးပါပြီ။ ၂၄ ရက်ကြာ nofap ပြီးတဲ့နောက်ငါ့ဆံပင်တွေရပ်တန့်သွားတယ်။ အခုငါမှန်ထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ဆံပင်တွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်။ ကျွန်တော်ဆံပင်ကိုရှစ်နှစ်ကြာအောင်ရှုပ်နေပါတယ် ပြီးခဲ့သည့်လကနှင့်ခြားနားချက်အလွန်သိသာသည်။ ငါကအခုဆံပင်ကိုညှပ်နေသလိုပဲ။ ငါဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကုသမှုမြောက်မြားစွာကိုကြိုးစားခဲ့သည်၊ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှကျွန်ုပ်အားဤရလဒ်ကိုမပေးခဲ့ပါ။ သင်အဲဒါကို placebo (သို့) သင်လိုချင်တာကိုခေါ်လို့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါယုံကြည်တယ်။ Nofap သည်အမြဲတမ်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းဆံပင်ကျွတ်သူများကိုအကျိုးပြုနိုင်ပြီးဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။
ကိုယ့်ပထမ ဦး ဆုံးအဓိကတိုးတက်မှု: ဝက်ခြံ! ကျွန်ုပ်အသက် ၁၄ နှစ်မှ စ၍ ဤအရာနှင့်ရုန်းကန်နေရသည့်အသက် ၂၀ အရွယ်ကျွန်ုပ်သည်ဆေးဝါးတိုင်းကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ တစ်ပတ်အတွင်းတွင်ပင်ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသည်နို့စို့အရွယ်၏အရေပြားနှင့်တူသည်! ငါအရမ်းအံ့သြမိတယ်ငါလိုအပ်တာကဟော်မုန်းပြန်လည်စတင်တာပါပဲ .. ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ fuck ဆိုတဲ့ကောင်လိုခိုင်မာနေတယ်။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/20iris/acne_just_vanished/
32yo ဒီမှာအရေဖျားလှီး fapstronaut ။ အနှစ် ၂၀ ထပ်ခါတလဲလဲစက်မှုဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုမှကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းကိုထိခိုက်စေသည့်ပျက်စီးမှုကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ပါ။ အကြှနျုပျ၏ glans, အနားကွပ်ပတ်လည်မှာနက်ရှိုင်းသော sulci နှင့်အတူ, ယားယံတောက်ပအနီရောင်နှင့်ရောင်ရမ်းခဲ့သည်။ Corona ပတ်ပတ်လည်ရှိ keratin ပုလဲများသည်ခန္ဓာဗေဒ၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုအစဉ်အမြဲထင်ခဲ့သည်။
PMO နှင့်ယောက်ျားအားအစားထိုးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်တစ်ဦးအဖုံးကို အသုံးပြု. ၏ 63 ရက်အကြာမှာ, ငါ့ glans အပြည့်အဝပေးရန်စတင်နေပြီ de-epithelial ယခုကျန်းမာသန်စွမ်းနှင့်နီးပါးလုံးဝချောမွေ့သည်။ ၎င်းသည်အနီရောင်တောက်ပ။ အရောင်တောက်ပမှုမရှိတော့သောကြောင့် keratin ပုလဲများသည်ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ sulci အဖြစ်ကောင်းစွာအပြည့်အဝအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေပါပြီ, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်အတော်လေးနက်ရှိုင်းသောသူများကျန်ကြွင်း။
နှစ်ပေါင်းများစွာလိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုစဉ်စိတ်ထိခိုက်လွယ်သည့်ကိစ္စများနှင့်ကျွန်တော်ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးအရေဖျားလှီးခြင်းခံသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ယခုမူ၎င်းသည်အများအားဖြင့် PMO၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာများမှမိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်စေသောဒဏ်ရာဖြစ်သည်ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့လိင်ဆက်ဆံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါငါ anorgasmia နှင့်အတူငါ့အပြissuesနာများပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟုတကယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီစိတ်ထဲဖျော်ဖြေဖို့တောင်ခွင့်ပြုဖို့အနည်းဆုံး ၂၇ ရက်ပိုကျန်သေးတယ်။ Porn နဲ့ Self- အလွဲသုံးစားမှုတွေဟာကောင်းကျိုးအတွက်ပဲ။
ကျွန်တော်ကောလိပ်တက်ခါစကတကယ့်ကိုရှားပါးတဲ့အတွင်းနားမှာရောဂါရှိတယ်လို့သိလိုက်ရတယ်။ ၎င်းသည်ဘဝကိုခြိမ်းခြောက်သည့်အခြေအနေမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်မနှစ်မြို့ဖွယ်လက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးနေ့စဉ်အသက်တာကိုအလွန်ခက်ခဲစေသည် (ဤဝီကီလင့်ခ်တွင်ကြည့်ပါ။ )http://en.wikipedia.org/ဝီကီ ​​/ Patulous_Eustachian_tube)
တိုက်ဆိုင်စွာဖြင့်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများ (နှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများ) နှင့်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်ကောင်းသောအရာအတွက်မရှိတော့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်မျက်မမြင် / စွဲစွဲလန်းလန်းဖြစ်နေပြီးတစ်စုံတစ်ခုကိုအမှန်တကယ်အတူတကွထားရန်ရှုပ်ထွေးနေသည်။ ကျွန်မရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက်ကိုနောက်သုံးနှစ်ကြာမှသာအရှိန်မြှင့်ခဲ့ပြီးကျွန်မရဲ့ရောဂါကပိုဆိုးလာတယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှေ့သို့ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်ရောက်ပြီ၊ ငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး reboot လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ PMO မွာကိုးလ၊ ငါ့နားနားရောဂါသည်တစ်နေ့လျှင်ကျွန်ုပ်၏နား၌သာရှိပြီးတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်တွင်အခြားနားတွင်ရှိနေသည်။ အနည်းငယ်တိုးတက်မှု, ဒါပေမယ့်ငါကတကယ်ဘာမှမစဉ်းစားကြဘူး။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအော်ဂဇင်ကိုကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ သို့ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ Eustachian ပြွန်၏လက္ခဏာများသည်အလွန်ဆိုးရွားလာပြီးကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်နောက်တဖန်ပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်။ ငါ့ရည်းစားနဲ့ငါရှည်လျားသောအဘယ်သူမျှမ O Streak လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအများကြီး rewiring နှင့်အတူငါကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုသတိထားမိစတင်ပါ။ ဒီရက်သတ္တပတ်သုံးပတ်အကြာမှာကျွန်တော့်ရောဂါလက္ခဏာတွေကတစ်နေ့လုံးကျပန်းကျဆင်းလာတယ်။ ငါနံနက်သစ်သားရှိခဲ့သည့်နေ့ရက်ကာလ၌ငါ့ရောဂါလက္ခဏာတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိ! နေ့ ၄၅ ရောက်တော့ငါ့ရဲ့ပြproblemsနာတွေပျောက်သွားပြီ။ နားနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ကျွန်ုပ်၌ရောဂါလက္ခဏာမရှိခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်အားသတ်မှတ်ထားသောဆေးကိုယူရန်မလိုအပ်ပါ။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူကိုလည်းအလွန်တုံ့ပြန်မှုရှိ။ ငါယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်ပျော်ရွှင်ခံစားရတယ်။ ထိုအချိန်မှစ။ ငါ့စိုက်ထူအရည်အသွေးငါ့ရည်းစားနှင့်အတူရှိသည်ငါ့အော်ဂဲနစ်နှင့်အတူဒီရေအတက်အကျပေမယ့်ငါ့နားရောဂါ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေလုံးဝနီးပါးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ငါသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးကိုအခုခြောက်လလောက်မသောက်ဘူး ငါပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့ဒီရောဂါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကြောင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ။
ကျွန်ုပ်၏အသံ၊ ယုံကြည်ပါ၊ မရ၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပြီ။ ငါအရမ်းအံ့အားသင့်သွားပြီးကျွန်တော့် SO ကဒါကိုသတိထားမိခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ v-mail intro ကိုယခုနှစ်အစောပိုင်း မှစ၍ ကျွန်ုပ်ဖန်တီးခဲ့သည့်အသစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အသံမတူပါကအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရမည်။ ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းသည်ကျွန်ုပ်၏အသံအမိန့်များကိုအသိအမှတ်မပြုတော့ဘဲရပ်တန့်သွားသည်။ မှားယွင်းနေသည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းပြီးခဲ့သည့်လက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အသံပုံစံများကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ထူဆံပင်, ပိုမိုအားကောင်းလက်သည်း, သွားပြီဟုဦးနှောက်မြူ, နည်းအိပ်ပျော်ခြင်းကိုပိုနိုးပြတ်သား, အားကောင်း, ပိုမိုပုလ်
ငါ့ဘောလုံးတွေပေါ်မှာအထည်တွေဖုံးအုပ်ထားတဲ့ရေခဲတွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအသုံးပြုပြီးငါကုသခဲ့တယ်၊ ဒါကလည်းအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ NoFap မစခင်ကတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်ဆက်သွားဖို့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခု။ LINK
ရက်ပေါင်း ၂၂၀ - PIED နှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်းတို့ဖြင့်တိုးတက်မှုများ! ဒါ့အပြင်လမ်းကိုပိုမိုယုံကြည်မှု
အသက် (၂၁) နှစ် - ၁၀ လအကြာမှာဘာကြောင့်ဒီလောက်ပြောင်းလဲသွားတာလဲ။
ပထမဦးဆုံးအကြိမ် fFor ငါနေ့ 72 တိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဤတွင်ကျွန်မသတိထားမိအကျိုးကျေးဇူးများနေသောခေါင်းစဉ်: သိသိသာသာလျှော့ချဆံပင်ကျဆုံးခြင်း, ဖြစ်နိုင်သမျှပေါကျ (ငါ MPB တစ်ပျော့လက္ခဏာခဲ့) ။ https://www.yourbrainonporn.com/ed-confidence-improved-higher-productivity-easily-concentrate
ကျွန်ုပ်၏အသံသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပြီးကျွန်ုပ်သည်အသက် ၅၀ ဖြစ်သည်။ အပျိုဖော်ဝင်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အချိန်အတော်ကြာကတည်းကဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလူတွေက“ မင်းရဲ့အသံဘယ်တော့မှကွဲတော့မှာလဲ” လို့ငါ့ကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့တယ်။ ငါဆိုလျှင်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်သောမှတ်စုများကိုမရောက်ရှိနိုင်ပါ။ …
ပြီးခဲ့သည့်2နှစ်ပေါင်းငါနာတာရှည်မောပန်းခြင်းနှင့်အတူရုန်းကန်နေခဲ့ကြပြီ။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စငါအိပ်ပျော်ဘယ်လောက်, နေပါစေဘယ်လောက်စားမိပါသည်ကျန်းမာအစားအစာ, နေပါစေငါသောက်မည်မျှရေသို့မဟုတ်မည်မျှဗီတာမင်ငါယူဆေးပြား, ငါရိုးရှင်းစွာအစဉ်အမြဲတခြားဘယ်သူ့ကိုမှထက်ပိုပင်ပန်းလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဆရာဝန်ငါ့ကိုအနည်းငယ်ကူညီပွုတျောမူသောသံဆေးပြားအကြံပြုသို့သော်ငါရှာဖွေနေခဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူး။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ခန့်မှန်း !? ယနေ့တွင်ငါမတိုင်မီဤမျှလောက်စွမ်းအင်ခဲ့ကြပြီခံစားခဲ့ရဖူးဘူးငါသဘောပေါက်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားအချိန်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ (6 ရက်ပေါင်းငါ၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးစံချိန်ဖြစ်ပါတယ်) ။ ငါမာရသွန် run နိုင်ပါတယ်တူသောငါအခြေခံအားဖြင့်ခံစားရသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့အရှိဆုံးငါ့ကိုအံ့သြစေတယ်ကျနော်တို့အများကြီးပိုပြီးအစွမ်းထက်ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ကြသည်ထင်ထက်ဖြစ်ကြောင်းသိရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ဖြစ်နိုင်ထင်ထက်အများကြီးပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်နှင့်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်🙂
ငါ crohns ရှိသည်နှင့် nofap အပေါ်ဖြစ်ခြင်းလုံးဝလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖယ်ရှားပစ်။ မသိသောသူတို့အဘို့။ စိတ်ဖိစီးမှုသည်မီးတောက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ permalink
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းမြင်မှု၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသာဖြစ်သည်ဟုမပြောနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏အာရုံကြောနှင့်ဟော်မုန်းဓာတုဗေဒမျှတမှုကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ IMO သည်ဤချိန်ခွင်သည် nofap ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရက်ပေါင်း ၇၀ ကျော် - ကျွန်ုပ်၏ရိုးသားသောအတွေ့အကြုံ
အရေပြားပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းသည် ၁၀၀% အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းငါ့မှာအရေပြားပြhaveနာတွေရှိပြီးငါ့မျက်နှာပေါ်က psoriasis ခံစားမှုခံစားရတယ် - သင်စိတ်ကူးကြည့်လို့မရနိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ် - ဒါပေမဲ့ fap ကအနီရောင်ပမာဏကိုလျော့နည်းသွားစေနိုင်ပြီးအခုဆိုရင် ၁-၂ မီတာအကွာကနေတောင်ငါ့အသားအရေကကြည်လင်နေတယ်။ ငါမှန်နှင့်နီးကပ်မှသာလျှင်ကျွန်ုပ်သည်အားကစားရုံ၌အားနည်းနေပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းအရေပြားပြန်လည်ဆိုးရွားလာသည် - ကျွန်ုပ်၏စိုစွတ်သောအိပ်မက်ပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်မပြည့်စုံမှုများကိုသတိပြုမိသည်။ ထို့ကြောင့် NoFap ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်သေချာသည်။
ငါစကားစပြောကတည်းကငါစကားထစ်နေတယ်။ ငါယုံကြည်အသက်အရွယ် 6-8 အတွက်မိန့်ခွန်းသင်ခန်းစာများတွင်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ အခု ၁၅ နှစ်ရှိပြီ ငါ fap မစတင်ခင်မှာပိုကောင်းလာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဝါကျတစ်ချောင်းကိုငါနင်းနေတုန်းပဲ။ အခုတော့ငါလုံးဝမှာလုံးထွေးထိတ်လန့်။ ငါအုပ်စုများအတွက်တာဝန်ကျတဲ့နေရာများအတွက်စကားပြောတွေအများကြီးလုပ်ပါနှင့်ထိုအခြိနျကာလ၌ထစ်ငေါ့သတိရလို့မရပါဘူး။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ၁ စကားပြောနေစဉ်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်စကားမပြောနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ငါပြောနေသူအပေါ်မူတည်သည်။ permalink
Nofap သည်ကျွန်ုပ်ပြောဆိုပုံကိုများစွာတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းထင်ပါတယ်, ငါကပိုသိသာင်, ငါ့စကားများပိုမို enunciate ။ permalink
သန္ဓေသားထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုမြှင့်တင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုကောင်းမွန်သောမိန့်ခွန်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊permalink
ငါဝန် stammered နေဆဲယခုပြုပါပေမယ့် NoFap ငါဖြည်းဖြည်းလည်းကူညီပေးသည်ပြောနေတာ, တစ်ကြိမ်ဝါကျသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုအထစ်အငေါ့မယ်လို့ sure.Before များအတွက်ကူညီပေးခဲ့သည်။ အခုတော့ခဲမှာအားလုံး။ permalink
NoFap ထံမှခွန်အား၌အဆ Gain!
ဒီတော့ fapping နေတုန်းတောင်အားကစားရုံကိုသွားရတာငါကြိုက်တယ် လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကအားကစားရုံသို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသွားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ လတာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်သန်စွမ်းသောလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အလယ်အလတ်ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အားကစားရုံ ၉ လအတွင်းကျွန်တော်ခွန်အားအနည်းငယ်သာရခဲ့သည်။ နှင့်မကြာသေးမီကပဲငါ fap နှင့်အတူလေးနက်ရပြီ။ အခုငါနှစ်ပတ်ကျော်လွန်ပြီ, ငါဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ခုံတန်းရှည်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
ငါအားကစားခန်းမကိုစလုပ်တုန်းကငါ BARELY ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာ ၉၅ ပေါင်ထည့်ပြီး ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာအရမ်းဆိုးတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ၉ လအကြာမှာ ၁၂၀-၁၂၅ ကိုပဲ ၁၃ ကြိမ်နဲ့ ၃ ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခဲ့တာပဲ။ fap မရှိတဲ့ပထမရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်မှာငါစုစုပေါင်း ၁၃၅ ထဲ ၀ င်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ ဒုတိယပတ်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည် (၅၅) စုံကို (၁၃) ကြိမ်ခွဲနိုင်ပြီးအခြား (၉) လလေ့ကျင့်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခွန်အားအလွန်ကြီးသည်။
အဘယ်သူမျှမ FAP စိတ်ထဲမှာ, ဒါပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမယ့်, ယောက်ျားတွေအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေတွန်းအားပေး Keep !!!!
ဤတွင်နယူး။ ယခုအချိန်အထိအကြှနျုပျ၏အဘယ်သူမျှမ FAP အတွေ့အကြုံ။ အလွန်အကြီးအကျယ်။
ကျွန်တော့်အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်တော့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကစပြီးဆိုးဝါးတဲ့ပြissuesနာအမျိုးမျိုးခံစားခဲ့ရတယ်။
ငါ့အလိုရှိသမျှရင်ဘတ်, ကျော, ပခုံး, လက်မောင်း, လည်ပင်းနှင့်မျက်နှာကျော်ပြင်းထန် cystic ဝက်ခြံ။
အကြှနျုပျ၏ Shin ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်တခါတရံတွင်အဖုတွေဖုံးလွှမ်းမည်ဖြစ်သည်။
ငါသည်လည်းငါ၏အနှာခေါင်း, နှုတျခမျးမှေးဧရိယာ, မေးစေ့, မေးရိုးဧရိယာနှင့်ဦးရေပြားန်းကျင်အရေပြားရောင်ရမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါ့မျက်နှာအားလုံးအပေါ်ယေဘုယျအားဖြင့်လည်းအလွန်အနီရောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ (ငါသူတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရပ်တန့်ခဲ့ကြပေမယ့်နီခြင်း သွား. မှန်မှန်ရောင်ရမယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှ) အလွန်အားကောင်းတဲ့ဝက်ခြံထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ဤသည်စတင်ခဲ့သည်။
ငါလုံးဝအားလုံးစွမ်းအင်ညှစ်ခြင်းနှင့်လုံးဝစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာ -i လအတွင်း go လိမ့်မယ်။
-i အစွန်းရောက်အစားအစာအမျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါပင် (ကိုယ့်ရေကိုသောက်) 38 နေ့ရက်ကာလအဘို့အစာရှောင်။ ငါထုတ်ကုန်များနှင့်ဗီတာမင်များ၏တန်ချိန်နှင့်တန်ချိန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူအားမျှအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်တစ်ညမှာကျွန်တော်ဟာအဖြေတစ်ခုရဖို့အရမ်းမျှော်လင့်နေပြီးအသက် ၂၁ နှစ်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုတဲ့အဓိကဝက်ခြံဖိုရမ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာကိုသတိရမိတယ်။ အဲဒါကိုစမ်းသပ်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုအချို့ရခဲ့တာကိုကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော့် post archive ကိုစူးစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ (လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်) ကကျွန်တော့်ရဲ့ ၂၁ ရက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုခဲ့ဘူး၊ ငါ့ရဲ့ဝက်ခြံသိသိသာသာတိုးတက်လာပုံအကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။
ဒီတော့လျှို့ဝှက်နက်နဲရာကငါဘာကြောင့်ရပ်ခဲ့တာလဲ။ ငါထင်တာကခက်ခဲလို့ခေတ်ရေစီးကြောင်းသိပ္ပံပညာကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျန်းမာတယ်လို့ပြောတာ ထိုစဉ်ကကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အထောက်အကူပြုသော Nofap အသိုင်းအဝိုင်း (ဘယ်လောက်ရှိသလဲသေချာမသိ) တစ်ခါမျှမတွေ့ခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်ငါ့ပြproblemsနာတွေကတခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အမြစ်တွယ်နေတယ်လို့ငါထင်ခဲ့မှာပဲ။
ဒါနဲ့တစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ် ၂ ရက်အကြာမှာ nofapping နဲ့ကျရှုံးမှုစတင်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့အော်ဂဇင်မရှိဘဲတစ်လကျော်သွားပြီ။ ငါ့ရဲ့ဝက်ခြံတွေကအများကြီးတိုးတက်လာတယ်၊ ငါ့ရဲ့ shins တွေလည်းပျောက်သွားတယ်၊ ငါ့အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းမရှိတော့ဘူး၊ ငါဟာစွမ်းအင်၊ စိတ်ဓာတ်တွေပိုကောင်းလာတယ်။
အမှုအရာလည်းအနည်းငယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ရဘယ်မှာအခုဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလ nofapping ၏အစတွင်ကျွန်ုပ်သည်အနားယူနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါ့အသားအရေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှရုတ်တရက်၊ ဒါဟာအနားယူခဲ့သည်။ ငါ Edging ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အရာအားလုံးအများကြီးပိုကောင်းလာပြီယခုငါအနားကနေလုံးဝအနာရောဂါငြိမ်းစရာပေါ့။
ငါ့အရေပြားပြproblemsနာအားလုံး ၁၀၀% ကိုငါ့တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှစွပ်စွဲထားသည်။ ငါ့အထဲမှာနီရဲနေပြီ။ ကျွန်တော့်ရဲ့အစားအစာကတောင်ကုန်းပေါ်တက်လာပြီးအရေးမကြီးဘူး။ ငါ (ငါ့အရေပြားကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေတာ) အော်ဂဲနစ်အားလုံးကို ၀ ယ်တယ်။ ငါ့အသားအရေကကျန်းမာလာတာကြောင့် Wal-Mart မှာစျေး ၀ ယ်ပြီးငွေစုဆောင်းနိုင်တယ်။ အမြဲတမ်းစီးပွားရေးတစ်ခုထူထောင်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကလိုအပ်တဲ့အရင်းအနှီးကိုဘယ်တော့မှမသိမ်းနိုင်ဘူး၊
ဒါကြောင့်အဲဒီမှာသင်ရှိသည်။ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်။ ယခုငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့အဘုရားလည်းအပျိုစင်သူကပြောတယ်ဆုံးရှုံးဖို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသည်။
ငါဂျူဒိုလူတန်းစားအတွက်တပန်းချင်းမျိုးစုံကျည်သွားနိုင်ပါတယ်။ ငါ2ကြိမ်တိုင်းချိုးယူမီ။ အခုငါအားလပ်ချိန်ယူစရာမလိုတော့ဘူး။
ဒီတော့ nofap နဲ့ရက် ၁၀၀ အတွင်းအရာအားလုံးပိုကောင်းလာပါပြီ။ လိင်အင်္ဂါများသည်အချိန်ကြီးမားစွာပြောင်းလဲသွားသည်။ အကယ်၍ သင်မစတင်သေးလျှင်၊ လပတ်လုံးစင်ကြယ်နေပြီးနောက်ကောင်လေးသည်မည်မျှနှိပ်စက်ခံရသည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်နံနက်သစ်သားဤအချက်မှာ 100 နှစ်အရွယ်တူသော။ ငါနှစ်များတွင်နံနက်သစ်သားဆည်းပူးကြပြီမဟုတ် စိုးရိမ်စိတ်အများကြီးနိမ့်သည်။ ငါသည်လည်းရှိသည် dystonia syndrome ရောဂါ ကြောင်းထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာလာသေး၏။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းကကျွန်ုပ်အပေါ်အလွန်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ချွေးထွက်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ခြေထောက်နှစ်ချောင်းတွင်ခြေလက်အင်္ဂါစနစ်ကိုဖြစ်စေသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါနာကျင်မှုမည်မျှဆိုးသည်ကိုရှင်းပြရန်ခဲယဉ်းသည်။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်တော့သည့်တိုင်သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းပုံမှန်တိုးတက်မှုများရှိသော်လည်းပြtheနာသည်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါစာရေးနေစဉ်ငါချွေးထွက်ခြင်းပြbeyondနာထက် ကျော်လွန်၍ မည်သို့ဖြေရှင်းခဲ့သည်ကို အခြေခံ၍ အခြားသူများအတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်အတူစာစီစာကုံးတိုလေးရေးသောကြောင့်စာဖတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ရပ်တန့်ရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်းအလေးအနက်ဖော်ပြသည်၊ YBOP ကနေ link တစ်ခုပေးပြီးဒီစာစီစာကုံးကိုလူတွေကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်။ eBooks မှ Link ကို
[နေ့ 100] အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာဆံပင့်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာစတင် ?! ပိုများသော tesosterone ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး? https://www.yourbrainonporn.com/age-22-my-clarity-thought-has-improved-tenfold-lots-energy-i-have-real-emotions
NoFap = အကောင်းဆုံးဝက်ခြံ“ ဆေး” လား။
NoFap နေ့ ၂၆ ရက်နှင့်ငါ့ဝက်ခြံပျောက်သွားပြီ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာ၌ရှိခဲ့သကဲ့သို့အရှင်းလင်းသောမျက်နှာရှိသည်။ ငါတက်ကြွသော X, နှုတ်နှင့်ပါးစပ်ဆေးများကြိုးစားခဲ့ပါတယ်နှင့်ဘာမျှမကူညီပေးခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုတည်းလားသို့မဟုတ်အခြားသူများလည်းသတိထားမိကြပါသလား။
ဒါပေမယ့်ငါအသက် ၁၆ နှစ်ရှိပြီ
ပထမအပတ်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်၏အသံသည်နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်းနှင့် ပို၍ နက်ရှိုင်းသည်။ (Thread လင့်ထားသည်)
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမျက်နှာလက္ခဏာအချိုးအစားအချို့ကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါ့မျက်နှာ၏ညာဘက်အခြမ်းသည်ငါ့ဘယ်ဘက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ မျက်ခုံးသည်မြင့်။ ငါအားနည်းသော jawline ရှိသည်။ ငါအခု ၃၅ ရောက်နေပြီဒီနေ့မနက်မှာငါ့ရဲ့မျက်နှာကပိုများတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏မေးရိုး၏ညာဘက်အခြမ်းသည်ပိုမိုတောက်ပလာသည်နှင့်တူသည်။ LINK
(နေ့ ၅၃၅) အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ - ငါ PMO ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာငါအမြဲတမ်းနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တာ၊ တုပ်ကွေး၊ အအေးမိခြင်းစတဲ့အရာတွေပါဘဲ။ Lမင်
အမျိုးသမီးများအတွက်ဤဆံပင်အချိုးအစားသည်အလွန်အကျွံရိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းကကျွန်တော့်မှာပါးလွှာပြီးဆတ်ဆတ်ဆတ်လတ်ဆတ်နေခဲ့တယ်။ ငါ့မိသားစုထဲကလူတိုင်းမှာဆံပင်ထူထူတွေရှိတယ် (အမေကလွဲလို့ဘာကိုခန့်မှန်းလဲဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါက porn / fap မဖြစ်မနေ / စွဲလမ်းမှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်) ငါဟာအမေ့ရဲ့ပါးလွှာတဲ့ဆံပင်မျိုးဗီဇရှိတယ်ဆိုတာပဲငါမှန်းလိုက်တယ်။
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က nofap ကိုရှာတွေ့ပြီးရက်ပေါင်း ၉၀ ရောက်ရန်ကြိုးစားသည်။ ငါဘယ်တော့မှမရပ်တန့်ခဲ့ဘူး၊ တစ်ခုမှပြန်လာတာကငါ့ကိုပိုပြီးအလုပ်များစေတယ်။ ငါကိုယ်တိုင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဂရုစိုက်စပြုလာသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအာဟာရအမြောက်အမြား (အမျိုးသမီးမိုးနှိုးဆွသောအရည်များသည်ရေမျှသာမဟုတ်) မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်စားခဲ့စဉ်ကတည်းကကျွန်ုပ်သည်ဘီလီဗိုက်တာမင်ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်သောက်နေသည့်အပြင် ငါသည်လည်းဗီတာမင် D နှင့် C ကိုပစ်လွှတ်လိုက်တယ်။
ခြားနားချက်ကအံ့သြစရာပါ။ ငါရာသီအပြောင်းအလဲကာလအတွင်းရလေ့တူသောငါနေမကောင်းမဟုတ်, ငါ့အသားအရေပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်း (fap နှင့်ဆိုင်သောစိုးရိမ်စိတ်ပျောက်ကွယ်ခြင်းမှလွဲလျှင်) ကျွန်ုပ်၏ဆံပင်အထူဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေကနေ့စဉ်ဗိုက်ဗစ်တာမင်နေ့စဉ်ဆံပင်ကိုယူခြင်းကဒီလှပတဲ့ဆံပင်ကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး။
သူတို့နားလည်သဘောပေါက်တာကငါဟာ P / MOing မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။
ဒီအဖြေတွေအများကြီး BRO-သိပ္ပံမှတက်တဘက်သတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေအာဟာရဖြန့်ဖြူးစာရင်းတွင်ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးရအခြားအရာအားလုံးအလယ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ လင့်ခ်
ကန့်ကွက်ခြင်းနှင့်တေးဂီတနှင့်စပ်လျဉ်း။ - ကျွန်ုပ်၏လက်များသည်ပိုမိုလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးဂစ်တာတီးသောအခါတွင်သူတို့သည် ပို၍ တင်းမာ။ မတည်ငြိမ်ပါ။ ငါအချို့ချိန်ခွင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မနှင့်အတူအများကြီးပိုကောင်းကြံဆတီထွင်နိုင်။ ငါဂစ်တာပုံဆွဲတုန်းကကစားတဲ့အခါတီထွင်ဖန်တီးမှုကလည်းငါ့ထံမှထွက်လာသည်။ …
ရက်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ရက်ပေါင်း Hardmode NoFap ဖြန့်ကျက်ခြင်းတွင်နေခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ပြင်းထန်သော Glaucoma နှင့်မျက်စိကွယ်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်။ တိုက်ရိုက် အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ငါ့ကိုမျက်စိကန်းစေတယ်။ ငါ glaucoma ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီ၊ ငါအသက် ၁၄ နှစ်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့်ဆရာဝန်တွေကပြောတာကအန္တရာယ်မရှိဘူး၊ ကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု: ငါ Masturbated သို့မဟုတ်များ၏အသက်အရွယ်မှီတိုင်အောင်လိင်မရှိခဲ့ဘူး 21 နှစ်ပေါင်း6လအတွင်းဒီလိုဖြစ်နိုင်ချေရှိရင်ငါ့အတွက်ဂလူးကомаကိုတားဆီးပေးတယ်။ ငါ့ကို ၁.၅ နှစ်အတွင်းမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့စတင်ခဲ့တယ်၊ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်မှာအလွန်လေးလံတဲ့ရောင်လာတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကဘာလုပ်ရမှန်းသိတယ် .. တဖြည်းဖြည်းမျက်စိကန်းလာတယ် ... .then ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ်သောအတွေးနှင့်အတူတက်လာ၏ ejaculating သုတ်ရည်တစ်ရက် 3x ငါ၏အမကြာမီမျက်စိကွယ်အဖြစ်တွေအများကြီးန်းကျင်ကိုငါ့ shitty life..turned အမှုအရာနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိစေခြင်းငှါ။ permalink
အလွန်အကျွံ PMO လုပ်နိုင်သည်ကိုပြသသည့်ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများစွာရှိပြီး၊ အဓိကမျက်စိပြissuesနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Mass floaters သူတို့ထဲကတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း။ permalink
ငါ့ကိုအပါအဝင်ယောက်ျားတစ်တွေအများကြီးသူတို့ရဲ့ရူပါရုံကိုတစ်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ, Ive ပင်ဖြစ်သောကြောင့် nofap ၏မျက်မှန်ကို အသုံးပြု. ရပ်တန့်ကြောင်းယောက်ျားတွေကြား၏။ permalink
[၂၃ မီလီမီတာ] ကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့် nofap ၂ လက်မကိုကျွန်ုပ်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်
 အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ဆရာဝန်ကပြီးခဲ့သည့်နှစ်စစ်ဆေးစာမေးပွဲတွင် ၆ ခြေထောက်အစက်ကိုတိုင်းတာခဲ့သည်။ စူပါဖြောင့်ခြင်းနှင့်အရာအားလုံးတက်သည်။ ယခုနှစ်ဆေးကုသမှုခံယူစဉ်ကာလအတွင်းထပ်မံတိုင်းတာရန်သူ့အားတောင်းဆိုခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်သည် ၆'၂ ။ အလက်ဇန်းဒါးနည်းလမ်းကိုကြည့်ပါ။ nofap နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အရမ်းကောင်းတယ်။ ရလဒ်များကွဲပြားနိုင်သည်။
အဘယ်သူမျှမကပိုလက်ဝဲမျက်စိတနေ့လုံးအကွောဆှဲ။ ဒီထက် strain နှင့်လျော့နည်းမျက်စိခြောက်သွေ့။ လင့်ခ်
NOFAP MY BALANITIS ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ
ငါ balanitis (လိင်အရောင်၏ပုံမှန်အရောင်အစားအနီရောင်ရှိသည့်လိင်တံ၏ရောင်ရမ်းခြင်းရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင်ထိမိသောအခါနာကျင်စွာကိုက်ခဲခြင်း) ကိုဖယ်ရှားရန်ဆေးဝါးများနှင့်လှည့်ကွက်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ တစ်ခါတုန်းကကျွန်တော့် glans တွေပေါ်မှာပျောက်ကွယ်သွားဖို့အစက်အပြောက်တွေတွေ့တော့ကျွန်တော်အရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ ငါ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာငါဟာဒီဒဏ်ရာကိုခံစားခဲ့ရပြီးအရမ်းနာကျင်ခဲ့တယ်၊ ပထမဆုံးအကြိမ်ငါလိင်တံရဲ့ ဦး ခေါင်းကိုနာကျင်မှုမရှိဘဲထိတွေ့ခဲ့တယ် ငါအစက်အပြောက်တွေဆုံးရှုံးသွားပြီးငါဘာအမှားလုပ်မိလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ ငါဆေးသုံးနေတုန်းပဲ။
ကျွန်တော့်ဆရာဝန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တောင်ပြောခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကတစ်ပတ်ကို ၂၅-၃၀ ကြိမ်တခါတရံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလေ့ရှိတယ်၊ အခုငါဟာတစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ်လောက်၊ ငါလိင်တံကိုစစ်ဆေးပြီး၊ နောက်သို့ !!! အခြေခံအားဖြင့်ငါဖြစ်ပျက်နေသည်ဟုထင်သည်မှာရောင်ရမ်းခြင်းမှာမှိုသို့မဟုတ်အချို့သော shit များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆေးသည်၎င်းမှစုပ်ယူသောမှိုကိုသတ်ရန်ကြံစည်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးကိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့သော်လည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမဟုတ်ပါ မှို၏ပြန့်ပွားရပ်တန့်! PMO သည်ပြန့်ပွားစေပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းတွင်ရှင်သန်နေစေသည်။ ငါစွဲနေခဲ့တာ ၁၀ နှစ်ရှိပြီ။ ဒါကြောင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ပျောက်ကွယ်သွားတာသတိထားမိတာကတော့အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မည်သူမဆို၎င်းတို့၏လိင်တံနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းပြproblemနာရှိပါကရပ်တန့်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဆရာ ၀ န်မှ၎င်းတွင်လုံလောက်သောသုတေသနမရှိခြင်းသည် ၁၀၀% သေချာသည် (သူသည်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးမဟုတ်သူ၊ ဆီးချိုရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ဟုအပြစ်တင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အောင်မြင်စွာတွေ့မြင်ခဲ့ရသောဆေးများသာလျှင်သုတေသနပြုရန်အချိန်မရှိပါ)) ငါမှိုပြန်လည်ထွင်ရန်အခွင့်အလမ်းမပေးသောကြောင့်, ဒီအစက်အပြောက် - ပျောက်ကွယ်သွားအရင်ကကဲ့သို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုငါသိ၏။
ငါသည်ငါ့မျက်စိပြီးခဲ့သည့်အပတ်က check လုပ်ထားရတယ် (နေ့က 30) နှင့်ငါ၏အလက်ဝဲမျက်စိဆေးညွှန်းအတူတူတည်းခိုသော်လည်းငါ့လက်ျာမျက်စိအနည်းငယ်တိုးတက်မှုဖြစ်သော -3, မှ-2.75 သွားလေ၏။ permalink
ကြောင့်အလွန်အကျွံ PMO နှင့်ဆက်စပ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေအသစ်တစ်ခု nofap ခရီးစတင်ခြင်း။
ငါနောက်ကျော, ရင်ဘတ်အပေါ်မှာငါ့ဦးရေပြားနှင့်ငါ့အသားအရေအတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအနာအမွေးကိုရဖို့စတင်ခဲ့ပြီးနဲ့ကျွန်မစပ်အစားအစာကိုစားကြ၏သို့မဟုတ် running ခံခဲ့ရသည်သို့မဟုတ်ထွက်အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်ရုတ်တရက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်အမျက်ဒေါသ၏အဆစဉ်အတွင်းလည်ပင်းအရာတိုင်းကို။ သူကတောင်အလယ်အလတ်နေရောင်ခြည်အတွက်အစပျိုးခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်နေရောင်ခြည်နီးပါးမခံနိုင်သောခဲ့တယ်။ ငါသည်လည်းဝက်ခြံကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့စတင်ခဲ့တယ်။
ယခုငါယားယံခြင်းနှင့်ဝက်ခြံကိုတောင်ငါ့အဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့နှင့်လုံးဝကုသမှုနှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့်ရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ဤမကြာသေးမီတစ်ကျော့ပြန်ငါ့ကိုပင်ငါ၏အဆယ်ကျော်သက်နှစ်တာကာလအတွင်းဤပြဿနာကိုညာဘက်အချိန်ကိုငါလှည့်ပတ်ခဲ့ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်စေဒီနေရာမှာဖော်ပြသင့်တယ် အလွန်အကျွံ masturbate မှစတင်ခဲ့သည်။
ငါအလွန်ထိရောက်သော levocetrizine သတ်မှတ်ထားသောအရေပြားအထူးကုနှင့်တိုင်ပင်။ ဒါပေမယ့်ငါသတိထားမိတာကချက်ချင်းပဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ပြုလုပ်ပြီးရောဂါလက္ခဏာတွေပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများအကြားဆက်စပ်မှုမရှိလျှင်အကြောင်းရင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆက်နွယ်မှုရှိခဲ့သည်။ ... ယခုငါအလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, urticarial နှင့်ပျော့ဝက်ခြံနှင့် microbladder ၏ပြtheနာနှင့်အတူငါဆက်စပ်အဓိကလက္ခဏာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကငါ့ကိုပိုပြီးမကြာခဏသွားစေသည်။
ငါ့မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝက်ခြံ ၂၂ ရက်ပါ၊ ကလေးအရေပြား။ 22 ရက်ပတ်သတ်: ကလေးအရေပြား။ ၃ ရက်တာ - နောက်ပြန်ဆုတ် - ၂၄ နာရီအကြာ BJ ။ နောက်ကျောဝက်ခြံ။ အခုတော့ဆက်သွယ်မှု biatch မရှိဘူးငါ့ကိုပြောပါ;)
ဒါကရုံကအလွန်အကျွံ fapping / PMO မှကြွလာသောအခါဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါအရာ၏သတိပေး, ဒါမှမဟုတ်အဘယ်အရာကိုငါသည်ငါ့အလွန်အကျွံ fapping စေသောထင်သည်။
ကျွန်ုပ်အသက် ၃၃ နှစ်ရှိပါပြီ ငါ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကတည်းကပလေးဘွိုင်ချန်နယ်မှ tits ၏ပုံရိပ်များကိုဆွဲဆောင်သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်ဝတ်လစ်စလစ်ပုံ၏ပုံရိပ်များကိုတုန်လှုပ်သွားစေသည်။ ကျွန်ုပ်၏အလေ့အထသည်တစ်နေ့လျှင် ၃-၄x (အချို့ရက်များမှ ၆x အထိ)၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း…နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ဖြစ်သည်။ ငါဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းမှာတော်တော်လေးစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့အဖြစ်အပျက်ကဒီရလဒ်ကြောင့်လားလို့ငါအမြဲတွေးမိခဲ့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသက် ၂၀ ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ဘ ၀ ကဆက်ပြီးဆိုးနေသေးတယ်။ ငါအလွန်အကျွံ fapping နှင့်အကြောင်းပြချက်များအကြားဆက်သွယ်မှုကိုရှာဖွေစတင်သောအခါဤသည်၌ငါစိုးရိမ်ပူပန်စရာအကြောင်းပြချက်မရှိပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေအကြိမ်အနည်းငယ်စဉ်းစားရှိရာအချက်အထိထိန်းချုပ်မှုမရှိသောကြောင့်၎င်းအကြောင်းတရားများ။ ငါနေတုန်းပဲမရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး ငါ့ရဲ့ဘဝမှာအရာဝတ္ထုတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ fapping ကိုသုံးခဲ့တယ်။ ငါ fapping အလုပ်များသောကြောင့်, ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ရန်နှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့ဖူးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ fetishes တွေကိုမွေးခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားယောက်ျားတွေကြားဖူးတာဒီအရာအားလုံးသေချာတယ်။ သို့သော်လည်းလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ဤထူးဆန်းသောရင်ဘတ်နာကျင်မှုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတစ် ဦး တင်းကျပ်စွာနှင့်အသက်ရှုပျော့ပျောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ ၀ န်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများစွာ၏စမ်းသပ်မှုအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည်စမ်းသပ်မှုရှိခဲ့ပြီး၊ ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာ (ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ) နဲ့ဆက်ပြီးငါ့ဘဝကိုငရဲကျစေခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်တစ်နေ့တာလုံးဆက်လက်တည်ရှိပြီးပြင်းထန်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရင်ဘတ်တင်းကျပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်မှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကအစာအိမ်လှုပ်ရှားမှုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်အစာအိမ်တက်နေရင်သူတို့မသိဘူး။ သင်၏အစာအိမ်သည်အစာကိုမည်မျှမြန်မြန်ဖြတ်သန်းသည်ကိုစစ်ဆေးသည့်စမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်ထူးဆန်းတဲ့စမ်းသပ်မှုကိုအောင်လိုက်ပြီ။ ငါကနှေးကွေးလိမ့်မည်ဟုအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူကအစာအိမ် motility ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအာရုံကြောစနစ်ကအကျိုးသက်ရောက်သည်ဟုဆိုသည်။ အကယ်၍ စာနာအာရုံကြောစနစ်လွှမ်းမိုးနေလျှင်အစာအိမ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပေမယ့်ငါအရာတွေကိုချိတ်ဆက်မပေးခဲ့ပါဘူး
အခုနှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားပြီ၊ မကြာသေးမီကလွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကလဲလျောင်းပြီးနောက်ကျွန်တော်မတ်တတ်ရပ်သောအခါကျွန်ုပ်၏နှလုံးခုန်နှုန်းသည် ၉၅ မှ ၁၀၀ အထိခုန်သွားသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ၎င်းသည် POTS ၏ရောဂါလက္ခဏာလက္ခဏာဖြစ်သော postural orthostatic tachycardia ဖြစ်သည်။ ငါကဘာလဲဆိုတာကိုဖတ်ပြီးစာနာမှုဆိုင်ရာအာရုံကြောစနစ်သည်မြင့်မားသောလေသံရှိသည့်အခါ၎င်းသည်နှလုံးခုန်နှုန်း၊ အစာခြေခြင်းစသည်တို့ကိုလျှော့ချရန်တာ ၀ န်ရှိသည့် parasympathetic အာရုံကြောစနစ်သည်အလုပ်မလုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်စာနာမှုလွှမ်းမိုးသောကြောင့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ acetylcholine တွင်ချို့တဲ့ခြင်းက၎င်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုယူဆသောသီအိုရီတစ်ခုရှိသည်။ acetylcholine သည်အလွန်အကျွံ fap ဖြစ်သည့်အခါသင့် ဦး နှောက်မှသင်ပျက်စီးသွားသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအားလုံးတိုက်ဆိုင်မှု၏လမ်းလွန်းသည်။
ငါ့ရဲ့အလွန်အကျွံ fapping ဒီများအတွက်အကြောင်းပြချက်ခဲ့သလား သေချာမသိသော်လည်း POTS လူနာတစ် ဦး ၏ပုံမှန်ပုံနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်နာမကျန်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဒါကအမြဲတမ်းလား။ ငါ အမှန် မမျှော်လင့်ပါဘူး သို့သော်၊ လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကျွန်ုပ်သည်ကြက်ဆင်အအေးခန်းသွားရန်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒါကကူညီနိုင်မလားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာငါ့ ဦး နှောက်နဲ့ကိုယ်ခန်ဓာကိုဒီလောက်ကြာအောင်ဖျန်ထုတ်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်မနာပါဘူး။ သဘာဝအရအချို့သော neurotransmitter ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်ရန် B-vitamins, magnesium နှင့်အခြားအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်ဖြည့်စွက်ထားသည်။
ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအလွန်အကျွံရိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပိုင်းဖြတ် ထား၍ အချို့သောအလုပ်များဖြင့်၎င်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ပညာရှိတစ် ဦး စကားလုံး: အားလုံးဖြည့်ညှင်းအတွက်။ ပိုလျှံသောမည်သည့်အရာကမဆိုသင့်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ထိခိုက်စေလိမ့်မည်
30 အသက်ငါ့ဆံပင်ပြန်ကြီးထွားလာသည် !!!
ကျွန်ုပ်သည် ၆ ရက်တွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရှည်လျားဆုံးဖြစ်ရပ်သည်ပြီးခဲ့သည့်လကရက် ၃၀ ဖြစ်သည်။ ငါ nofap6လအကြာကစတင်ခဲ့သည်။ ငါအကြိမ်များစွာမအောင်မြင်ပေမယ့် fapping အများကြီးလျှော့ချ။ ငါလတစ်လမှာ fap လုပ်ခဲ့တဲ့ ၈ လအတွင်းအလားတူငွေပမာဏကိုဖမ်းမိသလိုပဲ။ ကျွန်ုပ်ကိုယုံပါ၊ ကျွန်ုပ်သံသယဖြစ်သော်လည်းယခုလမ်းကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမကဝိညာဉ်ရေးသာမကပါ။ ငါအမျိုးသမီးတစ် ဦး အရာဝတ္ထုအဖြစ်ရှုမြင်ကြဘူး! သူတို့ကိုလူသားတွေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံ -
-memory တိုးတက်မှု (များသောအားဖြင့်နံနက်ယံ၌ပြန်လာမယ့်ဟောင်းအမှတ်တရများကိုမေ့လျော့)
-brain မြူသွားပြီ (အခြေခံ)
အိပ်ပျော်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူလိုအပ် -less အိပ်စက်ခြင်း,
ငါပြောသမျှအတိုင်းငါ့ခွန်အားသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်ပုံမှန် fapping ဖြစ်ခဲ့စဉ်ကပင်ကုန်းပြင်မြင့်တွင်ပေါင် ၁၁၀ ပေါင်ရှိသည်။ သို့သော်သူကခုတ်လှဲရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောအခါကောင်လေးသည်အပတ်တိုင်း ၅ ပေါင်ထည့်နိုင်သည်။ ၎င်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုဖြစ်! အခုငါ့ခုံတန်းလျားမှာ ၁၇၀ ပေါင်ရှိပြီး၊ Ive အစာစားခြင်း၊ အနားယူခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းများအတူတူပင်နှုန်းအတိုင်းအတာအထိမှတ်မိနိုင်အောင်ကူညီနိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ငါဒီသုတေသနနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသုတေသနမှမလုပ်ခဲ့ဘူး၊
ကိုယ့်ကိုပုံမှန်ရိုက်နေတုန်းမှာသူက“ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုနောက်တစ်ခါထပ်လုပ်စရာမလိုဘူးကောင်လေး ၁၀ ကောင်၊ ငါပင်ပန်းနေပြီ” နဲ့တူတယ်
noFap မှာရှိနေတုန်း "fuck ဆိုတဲ့ကဒီလိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၁၀ ခု ခွေးနေမကောင်း 10 လုပ်ပါ! ယူလာခဲ့ပါ!"
nofap ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. တစ်ခုမှာမတော်တဆတွေ့ရှိချက်
ဒီနေ့ငါတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ရဲ့ ဦး ရေပြားကုပ်ခြစ်နေတယ်။ မကြာသေးမီကကျွန်မရဲ့ဆံပင်အတော်များများဟာမီးခိုးရောင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတယ်။ ဘာကြောင့်ကျွန်မအသက် ၃၉ နှစ်ရှိပြီလဲ။ ဆံပင်ရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးအမြစ်မကုန်မှီတိုင်အောင်ကျန်နေတဲ့အ ၀ တ်အစားကအမည်းရောင်ပဲ။ ယခုဆံပင်အရှည်သည် ၂ လက်မခန့်ရှိပြီး၊ ငါ 39 သြဂုတ်လ 30 ရက်နေ့တွင် nofap စတင်2ရက်အပြည့် hardmode ကိုပြု၏။ ထို့နောက် ၂ ရက်အတွင်းအကြီးအကျယ်ပြန်ဖြစ်ပြီး ၂၃ ရက် hardmode ကိုတစ်နေ့ပြန်လည်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ငါ့ရဲ့အစားအစာအလေ့အထကိုငါပြောင်းလဲလိုက်ရင်ငါစဉ်းစားမိတယ်။ အများအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမ ... ရုံကြောင်းနေ့စဉ်လိမ္မော်သီးကိုစားစတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် NoFap ကဒီအကြောင်းကြောင့်လို့ငါထင်တယ်။
ငါ့အသံနက်ရှိုင်းတယ်ယုံကြည်တယ် ဒါကြောင့်သော်လည်းစတင်သောအခါမသေချာဘူး။ ... ငါတကယ်ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားများ, သံသယမျှမရှိကြပါဘူး။ ချိတ်ဆက်ရန် LINK - ဒီကသင်၏စကားသံကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းအသံစေပါသလား
၂ နှစ်နီးပါးကြာပြီးတဲ့နောက် ... ငါ ၉၀ ထိခဲ့တယ်။
ငါ့အသံကဒီ Streak အပေါ်အနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပြီနှင့်ငါ porn ကိုကြည့်ခဲ့ဘူးကြိမ်ငါနောက်နေ့ငါ့စကားသံကိုပြန်ဖြစ်ခဲ့ပုံကိုပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်သတိပြုမိသည်။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာရန်တစ်ပတ်ခန့်ကြာမည်။ IDK ကတကယ်ပဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံပါ၊ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအပြစ်တင်တာကအခုအချိန်မှာငါဘယ်လောက်အထိပြည့်ပြည့်စုံစုံကြိုက်နေတာလဲဆိုတာကိုဝေဖန်ခြင်းကဝေးဝေးနေရန်ကူညီသည်။
fapping ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းဝက်ခြံကိုဆင်းအခြေချရန်ကြာကြာအချိန် ယူ. , သို့မဟုတ်ပါကပင်နေ့ပိုကြီးနေ့ကတယ်။ အတူတူပါးစပ်အနာနှင့်အတူတတ်! ငါချွန်ထက်အံသွားသင့်သည်အတိုင်းငါအဆက်မပြတ်ပါးစပ်အနာရ။ အနာရောဂါငြိမ်းစရာအလွန်ရှည်လျား ယူ. ငါ့ကိုအားနည်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာကိုအမြဲကအရမ်းနွေးဖြစ်ကိုသုံးပါ။
ဆက်သွယ်မှုအချို့ရှိသော်လည်းအတိအကျကိုမသိပါ။ fap အတွင်းထုတ်လုပ်သောအပူဖြစ်ခြင်းသည်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ကိုယ်ခံအားစနစ်အားနည်းခြင်းနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ NoFap ၅ ရက်အပြီးတွင်တိုးတက်မှုများရှိပါသည်။ ဝက်ခြံများပေါက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲရုတ်တရက်ပြိုကွဲသွားပြီးအနာမပျောက်ဘဲ ၂-၃ ရက်အတွင်းဆေးမသွင်းဘဲထွက်သွားကြသည်။ ဒါ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်ကဲ့သို့နွေးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဟာကတူညီတဲ့လှေပေါ်မှာရွက်လွှင့်နေသူတစ်ယောက်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်သည် nofap ကိုအနည်းဆုံးရက်ပေါင်း ၁၄၀ လောက်ကြိုးစားနေသည်၊ အောင်မြင်မှုနှင့်အချို့သောကျောထောက်နောက်ခံအချို့ရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကငါ့အသံအကွာအဝေးတွေတိုးလာတာနဲ့အမျှကျွန်ုပ်ရဲ့အစွန်းတွေအားလုံးကိုသတိပြုမိခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ အမြင့်သည်ထိရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်အသံသည်ပိုမိုအားကောင်း။ pmo ကိုစဖွင့်ကတည်းကထင်သကဲ့သို့တုန်ယင်နေသည်။ ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်မှမည်သူမဆိုပြောဆိုပါစေ၊ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တစ်ခုတည်းသောတိုင်းတာ။ ရနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 'အားလုံးရလဒ်များအရအိပ်ယာ' ကိုငါ့ကိုမပြောနိုင်ပါ
ငါသည်ငါ့ကောင်အတွက်ချက်ချင်းအပြောင်းအလဲများအနီးကိုမြင်သောအခါ, ဒီ testosterone ဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခဲ့ကြပေမည်, ဒါပေမယ့်ငါကြိုးစားနေခြင်းမရှိဘဲပိုပြီးကြွက်သားပေါ်မှာချပြီးခဲ့သည်
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အချို့သောသူများအတွက်ဝက်ခြံထွက်စေသည်။ ငါတစ်ပါတ်သို့မဟုတ်နှစ် ဦး မှလူရှုပ်ကိုရပ်တန့်သောအခါငါ့အသားအရေရှင်းလင်းသွားသည်ဘယ်လောက်ရယ်စရာပါပဲ။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာပြန်ပေါ်လာတဲ့ဝက်ခြံပေါက်တာနဲ့ပြန်ထလာတယ်။ ကျွန်တော်ဒီစမ်းသပ်မှုကိုတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဖူးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၁၉ နှစ်ရှိပါပြီ
ငါ Nofap စတင်မတိုင်မီ MPB ဆံပင်လိုင်းသည်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ့ဆံပင်အရှုံးနှင့်အဆီပြန်ဦးရေပြားရပ်တန့်ခဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းနောက်ပြန်ဆုတ်သည်။
ငါမြင်နေငါနောက်ထပ်သက်ရောက်မှုခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်တစ်လျှော့ချရေးဖြစ်ပါတယ်။ ငါ strands (20-30) ၏အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာတွေအများကြီးပေါ်ဆပ်ပြာသုံးပြီးငါလိုက်တဲ့အခါယခုနေ့စဉ်ထွက်ကျသွားကြသည်။ ကျွန်မအလွန်အမင်းအမွေးဖြစ်ကြောင်းကို, ငါတစ်ခါတစ်ရံနွေရာသီကာလအတွင်းပခုံး, ရင်ဘတ်နှင့်လက်မောင်းကနေဆံပင်ကိုချုံ့ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2u0hzo/body_hair_changes/
ငါ 14 အကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့လ NoFap စတင်ခဲ့ပြီး, ငါ၏အကောင်းဆုံးအလင်းတန်းများဖြာ 87 နှင့် 90 ရက်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ လေးနက်သောစိတ်ကျရောဂါနှင့်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းဒီစတင်ရန်ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်။ ငါ6နှစ်ပေါင်း (ယခု im 24) အကြောင်းကိုအနိမ့် T ကခံစားနေရပြီးခဲ့သည်။ အသက်အရွယ် 18 မှာငါသွေးစစ်ထံသို့ ဝင်. နဲ့ T ရလဒ် n / mol 6,5 ကြီးပုံမှန်အကွာအဝေး 12-30 အကြားဖြစ်ပါသည်။ ထိုကာလအတောအတွင်းငါနေ့တိုင်း PMOing နှင့်အလွန်စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်များ testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးကိုစတင်ငါ့ကိုအကြံပြုပေမယ့်ဒါဟာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါကိုကူညီပါဘူး။ testosterone ဟော်မုန်းကို အသုံးပြု.2နှစ်ပေါင်းနောက်မှငါသဘာဝကျကျငါ့အကို T အဆင့်ဆင့်ဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နှင့်ဆေးဝါး အသုံးပြု. တော့ဘူး။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ testosterone ဟော်မုန်းယူပြီးပင်နိမ့်အကြှနျုပျ၏ကသဘာဝ T ကအဆင့်ဆင့်ကျဆင်းသွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာ fix ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာယူခဲ့ပါတယ်။ TRT ကြီးမားတဲ့အမှားဖြစ်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က Nofap ငါသွေးစစ်ခဲ့ချိန်၌ T ရလဒ်သည် ၁၁.၅ ဖြစ်သည်။ ငါကကိုယ်အလေးချိန်ကျပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အစာတွေကိုပိုစားလာတယ်၊ ချက်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေရခဲ့တယ်။ ကျွန်မအသက် ၁၆ နှစ်ကတည်းကကိုယ်အလေးချိန်တက်အောင်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ အများအားဖြင့် bodybuilding ။
ငါသည်ငါ၏အကောင်းဆုံး Streak, 90 ရက်နေနှစ်လအကြာ, ငါနေ့က 75 မှာသွေးစစ်ရန်သွား၏။ T ကအဆင့်ဆင့်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ထက်ပိုမိုမြင့်မား 22% 366 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့် 6% ခဲ့ကြသည်ဒီတော့ရလဒ်, 100 n / mol ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆရာဝန်များလည်းအလွန်ရလဒ်များကိုအားဖြင့် suprised ခဲ့ကြသည်။ ငါသော်လည်း NoFap အကြောင်းကိုဘာမှဖော်ပြထားခြင်းမေ့သွားရော: D ကို။
Nofap သည်ကျွန်ုပ်၏ T အဆင့်များကိုကောင်းစွာအဘယ်ကြောင့်သတ်မှတ်ရသည့်အကြီးမားဆုံးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့် fapping နှင့် T level နှင့်ပတ်သက်သော“ ဒဏ္ ”ာရီ” သည်အလွန်မှန်ကန်သည်။ ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် T ကို fix ရန်ကြိုးစားခြင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော် NoFap ကဲ့သို့မည်သည့်အရာကမျှအကူအညီမရ။ အခြားအထောက်အကူပြုအရာများမှာပိုမိုစပ်သောအစားအစာများ (ငရုတ်သီး)၊ D-vitamine၊ သွပ်၊ ကြက်ဥ (ကိုလက်စထရော) များပိုမိုစားသောက်ခြင်းနှင့်တစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်း ၃ ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အဆီဆုံးရှုံးခြင်းသည် T အဆင့်တိုးစေနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချတာလည်းပါပါတယ်။
ဒီထက် fapping ပိုတီ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2xqzt2/testosterone_levels_increased_100_blood_test/
ငါခံစားခဲ့ရသောဆံပင်ကျွတ်ခြင်းသည်လုံးဝနီးပါးမရှိတော့ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ ဒီ noFap ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုငါမထင်ခဲ့ဘူး! ငါအရမ်း ၀ မ်းသာမိတယ်။
ဒီတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ငါ့အတွက်နေ့ ၉ ရက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Fitbit ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကို ၀ တ်ဆင်သည်။ ညအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်အိပ်ပျော်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အိပ်စက်ခြင်းကိုခြေရာခံသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ည ၂ နာရီမှာအိပ်မောကျနေတဲ့အတွက်ဒီမနက် ၁၀ နာရီလောက်မှာကျွန်မနှိုးလိုက်တယ်။ ငါချက်ချင်းပဲဒီမနက်မှာနိုးလာတယ်။ စောလွန်းတယ်လို့ငါထင်တာက ၈ နာရီပဲ။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကကျွန်ုပ်အိပ်ပျော်နေပုံကိုကြည့်လိုက်တာတကယ်တော့ ၄.၅ နာရီလောက်အိပ်ချိန်နည်းနည်းအိပ်စက်လာတာပါ။ ဒါကမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရွေ့လျားနေဆဲဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်မှုမရှိတဲ့အိပ်စက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ နက်ရှိုင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်းက ၁.၅ နာရီခန့်မှာ logged ပါ။ သင်၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများပိတ်ထားခြင်းနှင့်သင်၏စိတ်သည်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးသောကြောင့် ပို၍ ကောင်းသောအရည်အသွေးရှိသည့်နေရာ၌အရွယ်ရောက်ပြီးသူခန္ဓာကိုယ်သည်ဘာလိုအပ်သနည်း။ NoFap သည်သင့်အားအိပ်စက်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေသော်လည်းအရည်အသွေးပိုကောင်းရန်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်ရသည်။ NoFap ကြောင့်သူတို့၏အိပ်စက်ခြင်းသည်ပြတ်တောက်သွားမည်ကိုစိုးရိမ်သောသူတို့အားစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ https://www.reddit.com/r/NoFap/comments/9u10ovc/day_2_sleep_cycle_and_nofap/
Nofap vs နေ့ 92 / Schizophrenia ။
ဒါဟာရေတိုဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါ schizophrenic ဖြစ်ကြောင်းကိုကြောင့်ငါယူ meds ၏ဝန်၏, ငါတစ်နည်းနည်းနဲ့ငါ nofap နှင့်မျှမ PMOing အပြည့်အဝအကျိုးခံစားခွင့်စမ်းသပ်မတတျနိုငျဖြစ်ကြောင်းကိုခံစားရတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၉၂ ရက်ရှိပြီ၊ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ငါ ***fယုံကြည်ကြသည်မဟုတ် !! ပြည်သူ့ငါ့ရီစရာပြက်လုံးရယ်မော။ ငါခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်အများဆုံးအချိန်ငါစကားလက်ဆုံ ဦး ဆောင်လမ်းပြ။ ငါထပ်မံပြောဆိုမှုများတွင်“ လျောက်ပတ်” ရန်လိုအပ်သည်ဟူသောခံစားချက်မရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ရေရှည် schizophrenia ကြောင့်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမခံစားဖူးပါ။
၃ ပတ်အစီရင်ခံစာ - အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၊
သင်မေးလိမ့်မည် - ယုံကြည်မှုရှိသူ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသူ၊ အပြင်ထွက်ပြီးမိန်းကလေးများရသူတစ် ဦး အတွက်အကျိုးရှိပါသလား။ ရှိပါတယ်ဖြောင့်ဖြောင့်!
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ကိုယ့် PMO ရပ်တန့်ခဲ့ကြအစဉ်အဆက်ကတည်းကအခုစွမ်းအင်ပိုမိုတစ်တန်ရှိသည်။ ဒီအတိတ်3ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအပြင်းအထန်ထွက်အလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့ပြီ အဆိုပါအကျိုးအမြတ်ပြီးသားမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရပြီ!
အသားအရေ အများကြီးချောမွေ့ဖြစ်ပါသည်, အဲဒီအကြောင်းအလင်းရောင်မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမဝက်ခြံတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာရှိတယ်။
ဆံပင် , ထူဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့နှင့်မျက်နှာဆံပင်တွေအများကြီးမြန်ကြီးထွားလာခံစားရ
အသံ ပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီး၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုအားကောင်းသည့်လေသံလည်းရှိသည်။ ငါပြောသောအခါလူများသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ရှင်းလင်းစွာနားမထောင်မီ၊ ယခုတွင်ငါသည် ပို၍ များသောစန်းနှင့်ပြောဆိုသည်။
မျက်စိ ၀ ံပုလွေကဲ့သို့ပိုမိုပြတ်သားပြီး၎င်းတို့တွင်ဘဝများစွာရှိသည်။ ငါ pmo'ing သောအခါငါသူတို့ပိုပြီးဖုတ်ကောင်ကဲ့သို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ယခုသူတို့၌ဤလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိသည်ညှစ်ညှစ် !!
စကိတ်ဘုတ်စီးခြင်းကြောင့်ယခုငါ ACL ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းကိုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ရှိနေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်ဒူးခေါင်းတွင်အားနည်းချက်များကိုပင်သတိမထားမိဘဲရှိနေသည်။ ငါနေ့စဉ် fap ဖြစ်လျှင်, ငါ့ဒူးအများကြီးအားနည်းခံစားရနှင့်ကထုတ်ပေးခြင်းဖို့ပိုပြီးကျရောက်နေတဲ့ပုံရသည်သော်လည်း permalink
ငါတစ်လမှဖန်ဆင်းနဲ့ကျွန်မရလဒ်အဖြစ် (ဆရာဝန်-အတည်ပြုခဲ့သည်) ဆေးခန်းကျန်းမာဖြစ်၏။
ငါမှာကမှာသွားခဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကနောက်ဆုံး 10 နှစ်ပေါင်း အနည်းဆုံး တနေ့တကြိမ်သာ။ ငါတကယ်အရာအားလုံးထက်သိတယ်ဘယ်တော့မှမ။ ဒါဟာငါ့အဘို့အလွန်ပုံမှန်နှင့် ritualistic အလေ့အကျင့်ခဲ့သည်။
နှစ်အနည်းငယ် (အထက်တန်းကျောင်း) ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ၊ ငါမှာစွမ်းအင်မရှိဘူး၊ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ shit လိုရက်အတော်များများခံစားရတယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်လျှင်ယခုသိသာထင်ရှားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အားလုံးသည် testosterone ဟော်မုန်းနည်းပါးနေသည်။ အပျိုဘော်ဝင်ချိန်အတော်အတန်နောက်ကျပြီး၊ အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်မှီအထိမျက်နှာမဆံပင်ကြီးထွားခြင်းကိုမစတင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားသော၊ ငါဖြစ်တည်မှုအများစုအတွက် (အခြေခံအားဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပေမယ့်ရုတ်သိမ်းခြင်းကငါ့အတွက်အရမ်းခဲယဉ်းခဲ့ပြီးခိုင်လုံသောရလဒ်များကိုမတွေ့ရခြင်း) အတွက်ငါဟာအခြေခံအားဖြင့်inတ္ထိယဝါဒီရဲရင့်သူတစ် ဦး ပါ။
ဒီနှစ်ဆောင်းရာသီကိုနောက်တစ်ခေါက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့သွားမယ်၊ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တကယ်အလေးအနက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါ (လိုအပ်သည့်) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရရန်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ထံသွားပြီးစာမေးပွဲအပြီး testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်သောဂန္ထဝင်အရိပ်လက္ခဏာများ - ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ပါးလွှာသောဆံပင်၊ အလေးချိန်တိုးလာသည်။ ဒီဆရာဝန်ကကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီးစကားမပြောဘူး။ သူကကျွန်တော့်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှောင့်ယှက်ပြီး“ Low testosterone ဟော်မုန်းလား? မင်းအသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီ။ လမ်းမရှိဘူး။ ” အချို့သောစျေးနှုန်းများကျပြီးနောက်သူသည်ကျွန်ုပ်၏ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏမည်မျှရှိသည်ကိုသိရန် T-count လုပ်ရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူနာပြုတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးအလွန်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည့်အချက်မှာကျွန်ုပ်သည်ဆေးခန်းတွင်အတည်ပြုပြီးသော testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါယောက်ျား၏ "ပုံမှန်" testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်အဘို့အရောင်စဉ်များ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်နိမ့်ဆုံးအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ (သူမကျွန်ုပ်အားသူဖတ်ရှုသောနံပါတ်များသည်ပုံမှန်အကွာအဝေး - ၄၅-၉၀၀ - သင်၏ရလဒ် - ၈၃) ဖြစ်နိုင်သည်။
ကြားချင်နေတယ်။ ငါဆိုလိုတာကငါဟာမျှော်လင့်ချက်ရှိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီသူနာပြုနဲ့သူမကိုတကယ်တမ်းသူတို့ပြောတာကသူတို့ကကျွန်တော့်ကို endocrinologist ကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ပြောနေတာကတော့ကိုင်တွယ်ရတာတော်တော်ခက်ပါတယ်။ ငါ (ကြောက်မက်ဘွယ်သူ) တစ် ဦး endocrinologist ကိုတွေ့မြင်တက်အဆုံးသတ်, သူသည်နောက်ထပ် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်ဆက်စပ်သောအနည်းငယ်စမ်းသပ်မှုများနှင့်ငါ့ကိုအတော်လေးပြင်းထန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပေး၏။ သူ၏စီရင်ချက်မှာ“ သင်လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်၊ တော်တော်ကျန်းမာနေပုံရသော်လည်းရှားပါးသော်လည်းသင်၌ testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်သော်လည်းသင် testosterone ဟော်မုန်းနည်းနေခြင်းကြောင့်သင်၌အခြားအရာတစ်ခုခုမှားယွင်းနေသည်ကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်” ဒါကြောင့်ငါလာမယ့်လများအတွင်းစီစဉ်ထားအနည်းငယ်ပိုပြီးချိန်းခဲ့သည်။
ဤအရာအားလုံးကိုတစ်လျှောက်လုံးအစဉ်မပြတ်ငါငါ့အစဉ်ဆက်မပြတ် fapping ငါ၏အပြဿနာများပံ့ပိုးနိုင်သောဤဆီးရီးယားနဲ့အစ်စခံစားချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲငါသည်လည်းနေပါစေကိုယ်ကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ဘယ်လောက်, ရပ်တန့်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်တစ်ခေါက်မြန်မြန်ပို့နိုင်ပြီ။ မတ်လကုန်ပြီ။ ငါခရီးတစ်ခုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာပဲ။ ငါ ၉ ရက်ကြာတိုင်းပြည်ကနေထွက်သွားမှာပါ၊ ဒါကငါကြာမြင့်စွာကတည်းကဒီလောက်ကြာကြာနေခဲ့တာပထမဆုံးပါ။ ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်, ငါခရီးစဉ်အပေါ်ငါ့အကျင့်ဆိုးတွေအားလုံးနီးပါးကိုချိုးဖောက်တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့လျှင် ၁၆ နာရီလောက်လမ်းလျှောက်ရင်းအပြေးတက်ခြင်းကဲ့သို့သောအရာများကိုသင်အနည်းငယ်စဉ်းစားမိသည်မှာအံ့သြစရာဖြစ်သည်။
မည်သည့်နှုန်းနှင့်မဆိုဆိုဒါသောက်သည်၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းကစားသည်၊ သို့မဟုတ် PMO မျိုးစုံရှိခဲ့သည့် (တစ်နှစ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်သည်။ ) (technပြီလတွင်နည်းပညာအရ Hard-mode ကိုကျွန်ုပ်မစီစဉ်ခဲ့သော်လည်း) ။ ငါတကယ်တကယ်တကယ်ကြီးမြတ်ခံစားရတယ်။ ငါသတိထားမိသောပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည့်ပြissuesနာများမရှိတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အပြေးစတင်ပြေးဆွဲသည့်စွမ်းအင်အလုံအလောက်ရှိခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းကာယပိုင်းအရတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပြီး၊ အမှန်တကယ်ခံစားရရန်စွမ်းအင်အလုံအလောက်မရှိခဲ့ပါ။ ) run!) နှင့်ယခုကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးပေါ်သို့:
တကယ်တော့အခြားနေ့ကကြှနျတေျာ့ယလေ့ကျင့်ခန်းအပြီးနံ။ ငါကအရမ်းသစ်ကိုတစ်ခုခုဖြစ်သည့်အနံ့, သူရဲ, ခန္ဓာကိုယ်အနံ့၏အနံ့ကိုခံ ယူ. ။
ငါအပြည့်အဝအတိတ်ကာလရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ငါ့အဘို့အခြေခံအားဖြင့်ဘာမျှမပွုပါပွီရသောနမ်းခြင်းနှင့်ထိထိမိမိတူသောရိုးရှင်းတဲ့အရာအားဖြင့်ဖွင့်နှိုးဆော်ခြင်းရာမကြာသေးမီကအကြိမ်အတော်များများရှိခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်၏ (၃ ပတ်အမှတ်အသား) တွင်အခြားဆရာ ၀ န်တစ် ဦး နှင့်ချိန်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုပြန်လည်ရရှိရန်အခြားနေ့ကိုဖုန်းဆက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်များသည်သိသိသာသာတိုးတက်လာပုံရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏မူလစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့စဉ်က ၃ ဆမျှကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။ ငါမယုံနိုင်သေးသေးဘူး
ဤအရာအားလုံးကို NoFap အထိသိမ်းရန်စုစုပေါင်း circlejerk (…ဤနေရာတွင်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးအသုံးအနှုန်းမဟုတ်နိုင်) ဖြစ်ဟန်တူသည်၊ သို့သော်ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင် PMO မရှိသည့်တစ်လပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းသောလူသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းကတော့ငါအခုငါဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။
အဘယ်ကြောင့် NoFap သင်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေမပေးပါဘူး: ငါ့အ 90 နေ့ကအစီရင်ခံစာ
•ယခုပုံမှန်အလေးချိန်အကွာအဝေး, အတိတ် 60 လအတွင်း6ပေါင်ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့။
•အရေပြားမရှိတော့ဆီပြန်ဖြစ်ပါသည်, ရောဂါ psoriasis ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါသည် - ကြောင့်တိုးတက်လာသောတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးခြုံငုံရန်
•ဆံပင် (ခေါင်းလျှော်ရည်ပျစဲအုန်းသီးရေနံ +) အပျော့နှင့်အတောက်ပဖြစ်ပါသည်
ကျွန်တော့်ကိုယ်ခံအားစနစ် nofap ဘယ်လောက်အားကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တကယ်သတိပြုမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအအေးမိခြင်း (ငါ့နှုတ်ခမ်းပေါ်ရှိရေယုန်) တစ်ခါတစ်လေတစ်လကိုနှစ်ခါလောက်များများရမယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုအရူးမောင်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကျန်းမာစွာစားနေခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူး။ nofap စတင်ပြီးနောက်သူတို့ပဲ disapeared ။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေသည်ဟုပြောသောလေ့လာမှုများကို BS ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြသည်။
ဒါဟာရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအရာအချို့ကိုမျိုးဖြစ်ရပါမည်။ အထီးများအတွက်ဦးစားပေးသမျှသောအချိန်များတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးရဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ မျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ သငျသညျ FAP နှငျ့သငျကိုယျခန်ဓာတိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ဦးစားပေးငါမှန်းဆပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ဘောလုံးဖြည့်ရန်ဖြစ်သည်။
ငါ NoFap စတင်ခဲ့ကတည်းကငါ့ဆံပင်ကျဆင်းနှုန်းမှာကျိန်းသေသို့သော်ဒီငါသည်ငါ့ Streak စောင့်ဆက်လက်ရန်ရှိသည်ခန့်မှန်းဆိုရာသီအလိုက်ပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်အခြားအချက်တစ်ချက်ကြောင့် NoFap ကြောင့်နှင့်မကြောင်းအတည်ပြုရန်, သိသိသာသာကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ permalink
pics နှင့်အတူ nofap အပေါ်မုတ်ဆိတ်တိုးတက်မှုနှုန်း
PMO 12 မှတက်ငါ့အရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည်လှည့်. ငါရပ်တန့်ဖို့ရှေးခယျြရုံအခြားအကြောင်းပြချက်။ အလေးအနက်ထားပြောရရင်ဒါကငါမဟုတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါကတချို့လူတွေကိုရာသီအလိုက်နှာခေါင်းရှူခြင်းဖြင့်ကူညီနိုင်သည်။ PMO ဒါမှမဟုတ်မကောင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်းနောက်မှာအနည်းဆုံးသုံးဆလောက်ပိုဆိုးလာတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ NoFap ကိုအသုံးပြုပြီးတစ်သျှူးပိုက်ဆံစုဆောင်းထားတာဖြစ်တယ်၊
- ပိုကောင်းသောကြွက်သားလေသံ (ပြီးခဲ့သည့်လကထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ!)
- psoriasis ပျောက်ကွယ်သွားသည် (၎င်းသည်နှစ်စဉ်ပြproblemနာဖြစ်သည်!)
- ပိုကောင်းသောနောက်ကျောနှင့်လည်ပင်းအခြေအနေများ (နောက်ကျောနာကျင်ခြင်းနှင့်လည်ပင်းတောင့်တင်းခြင်းများခံစားခဲ့ရသည်)
- ပိုကောင်းသည့်အသားအရေ (လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံဆရာတစ် ဦး က 'ကျွန်ုပ်ငယ်သည်ဟုထင်ရသည်' ဟုပြောခဲ့သည်) အသက် ၃၈ နှစ် -
အိုင်တီမြားဖှဲ့: 90 ရက်ပေါင်းအမာခံ NoFap, ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို, etc
ငါ 10 နှစ်ကျော်အဆက်မပြတ်ဝက်ခြံနှင့်အနီရောင်, ပခုံးကနေတံတောင်ဆစ်အထိ, ငါ့ triceps နှစ် ဦး စလုံးရှိ! ငါအရေပြားအထူးကုတွေအများကြီးနဲ့သွားတွေ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးကပုံမှန်လို့ပြောကြတယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုမွှေးတွေပေးတယ်၊ ဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ အရမ်းနာတယ်၊ အရမ်းနီတယ်၊ တချို့ကငါ့ကိုဘာကမ်းခြေမှာမေးခဲ့တာလဲ၊ ဒါကဘယ်လောက်ဆိုးလိုက်တာလဲ .. ငါ ၆ ရက် NoFap နဲ့ငါ့ဆယ်စုနှစ်ကြာအရေပြားပြproblemနာပျောက်ကွယ်သွားတယ် !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! ငါအရမ်းဝမ်းသာတယ်၊ စကားလုံးမရှိဘူး။ ငါ့ကိုယ်ခန္တာကိုယ်၌ရှိသမျှသောအသွေး၌ငါရှိ၏။ ဒါဟာတကယ်ကိုအစွန်းရောက်ပျော့ပျောင်းသည်။ အစာစားခြင်းနှင့်အခြားအကျင့်ဓလေ့များကိုကျွန်တော်မပြောင်းလဲခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည် NoFap ဖြစ်နိုင်သည်။
ရက်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော် fap မရှိ…… .scalp oiliness သွားပြီ
fapping ၏ 25 နှစ်, များသောအားဖြင့်တစ်ကြိမ်ကြိမ်2ကြိမ်တနေ့နှင့်တစျနေ့မှာ, ငါ့ဦးရေပြားကလွန်ခဲ့တဲ့အချို့ 18 yrs ဆီပြန်ဖြစ်လာစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အခြေအနေပေါ်ငါတစ်ဦးဦးခေါင်းရေချိုးယူရန်ပျက်ကွက်လျှင်ထို့နောက်ဆံပင်ကြောင့်အဆီပြန်ဦးရေပြားရန်အလွန်အဆီပြန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်ဒါမကောင်းတဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အရှင်လက်ရှိအခြေအနေငါသည်နံနက်အချိန်၌တစ်ဦးဦးခေါင်းရေချိုးယူလျှင်ညဦးယံအချိန်အားဖြင့်ဦးရေပြားအဆီပြန်ပါလိမ့်မည်နဲ့ကျွန်မနောက်တဖန်တစ်ဦးဦးခေါင်းရေချိုးယူရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။ ယခုမူကားငါအဆီပြန်ဆင်းသွားပြီသေချာမကြည့်နိုင်ပေမယ့်ငါတကယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဝေမျှ၏ထင်နောက်ဆုံး2ရက်ပေါင်းကနေခံစားရတယ်။
Seb Derm / Rosacea သို့မဟုတ်အရေပြားပြဿနာများ (NoFap Related) ရှိသည်သောသူတို့အဘို့
ပြီးခဲ့သည့်2ရက်သတ္တပတ်ငါ MSM နှင့်နို့ဆူးပင်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးအများကြီးငါ၏အ Rosacea / SebDerm အပေါငျးတို့သဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ (ကျနော်အနီရောင်ရရှိသွားတဲ့သောနှာခေါင်းခြံများနှင့်မျက်ခုံးတစ်လျှောက်အရာမျိုးရှိသည်။ အစားအသောက်ကချွတ်ကခဏတာနှင့်ဘုံ rosacea ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း) ငါအလေးချိန်ရရှိမှုစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်အလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအချိန် :) စိတ်မပူပါနဲ့ရန်ရှိသည်ပြင်ပတွင်သွားနှင့်လို့မရပါဘူး။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ... ယခုငါထပ်ခါတလဲလဲပြန်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထိုအခါငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့သည်ထွက်နေသေးတယ်။
တစ်ခုလုံးကိုပထမ ဦး ဆုံးအပတ်ကအကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ပီပီအဖြစ်စင်ကြယ်၏။ ထိုအခါငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ နောက် ၃ နာရီအကြာမှာ။3အစက်အပြောက် SHIT အနီရောင်အစက်အပြောက်များနှင့် webby ရောင်ခြင်း။ WTF? ငါတပတ်လုံးသန့်ရှင်းနေတယ် ပိုပြီးရက်အနည်းငယ်ငါပြန် nofap ခဲ့သည်။ နောက်တဖန်ဆေးကြောပါ။
ပြီးတော့ရက်အနည်းငယ်အကြာ, ငါတစ်နာရီအတွင်းနှစ်ကြိမ် ... omg ... အစဉ်အဆက်အဆိုးဆုံး rosacea အချို့ fapped ။ ငါဒါကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆက်သွယ်မှုမှာ ၁၀၀% ရှိသည်။ ၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တိုအွန်လိုင်းပေါ်မှကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းအကြောင်းအရာများမှလူအများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်ဗစ်တိုးရီးယားခေတ်ကရိုစီယာယာဟာနာတာရှည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူရဲ့သင်္ကေတလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဤ“ ဒဏ္ ”ာရီ” များသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိနေကြသည်။ ဝက်ခြံ၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းစတာတွေဟာလူတွေနဲ့အမှန်တကယ်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုပြောသောအစီရင်ခံစာများ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဝက်ခြံ၊ ပြီးတော့ဒီအရေပြားဆိုင်ရာပြissuesနာအားလုံးဟာလူအများစုအတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ပြappingနာများစွာဟာ fapping နဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်မအပြည့်အ ၀ ယုံကြည်တယ်။ ငါဒီနေရာမှာသံဖြူမွှေးညှပ်နေတဲ့ ဦး ထုပ်မဖြစ်ချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဝက်ခြံလိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကသင့်ကိုကုသမှုအစစ်အမှန်ကိုရှာမတွေ့စေချင်ဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်ဝက်ခြံသည်အစားအသောက်များသာဖြစ်သည်ကိုသင်သိလျှင်…သူတို့သည်သင့်အား accutane, peroxides, laser laser, ကုသမှုများ၊ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကကျွန်ုပ်၏အသားအရေကိုစုပ်ယူပြီးအစားအစာနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့သည်။ သူက "လုံးဝမဟုတ်ဘူး" ဟုပြောသည်။ ယခုနောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံနှင့်ကိုယ်ပိုင်အကောင့်များပင်လျှင် ၁၀၀% ဟုတ်သည်ဟုပြောကြသည်။
ဒီမှာငါ့အယူအဆပါ။ မျက်နှာပေါ်ရှိအရေပြားပြissuesနာများနှင့်ဆက်စပ်သောအစပျိုးမှုအားလုံးသည်အသည်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဓာတ်သတ္တုအချို့နှင့်ဆက်နွှယ်သည်။ လူများစွာသည် MSM၊ Zinc, Magnesium စသည်ဖြင့်ကုသပေးသည်။ အရေပြားပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းသည်။ များသောအားဖြင့်သူတို့သည် anti-oxidants များဖြစ်ကြသည်။ OR အသည်းကိုကုသရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေသောနို့စို့စ်၊ MSM စသည်။
အခုဒီပြissuesနာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲ။ ကောင်းပြီအရေပြားအစပျိုးနီးပါးအမြဲအသည်းနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြသည်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၊ သကြား၊ အဆီစသည်တို့…အားလုံးသည်အသည်းနှင့်ဆက်နွယ်သည်။
ပြီးတော့အွန်လိုင်းပေါ်ကလူအများစုက Fapping နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည်းပြproblemsနာတွေကိုသတင်းပို့နေကြတယ်။ fapping သည်လူအချို့အတွက်အသည်းကိုအကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်ခြင်းနှင့်အရေပြားအတွင်းရှိဓါတ်တိုးခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်စွမ်းနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းကြောင့်ပြissuesနာများဖြစ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရေပြားပြdietနာများသည်အစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဟုထင်ရသည်။ အသည်းသည်အသွေးကိုသန့်ရှင်းစေပြီးဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကအသည်းများကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်စွမ်းကိုတားဆီးပေးပြီးသင်ပိုမိုနွမ်းပါးသောအရေပြားနှင့်အဆုံးသတ်သွားသည်။
ငါသည်ဤအချို့သိပ္ပံမိုးသည်းထန်စွာဒါပေမယ့်ငါကအားလုံးကိုရှင်းပြဖို့ဖြစ်လျှင်ကပိုရှည် 20x စေခြင်းငှါတောင်းပန်။
ဒီတော့ TLDR ကဒီရောဂါပျောက်ကင်းတယ်။
၁) MSM ကိုယူပါ။ (Methylsulfonylmethane ဖြည့်စွက်ချက်များ) ၂) နို့ကိုဆူးပင်ကိုယူပါ။ ၃) Fap မလုပ်ပါနဲ့
ငါ2ပတ်အဘို့ဤအမှုကိုလုပ်နေခဲ့ကြရတယ်။ ငါကိုယ်တိုင်အစပျိုးခြင်းများပြုလုပ်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းအကျပ်စေခိုင်းခဲ့သည်။
ငါကသငျသညျအထဲက Bros ကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
PS ။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ဘောက်လွန်းသွားပြီနေကြသည်။ ရုံဆုကြေးငွေ။
[အကျိုးမရှိမဟုတ်ပေမယ့်စိတ်ဝင်စားဖို့] ၎င်းသည် [၁၅ ရက်] nofap ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိသော်လည်းမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်အရက်ကိုလွန်စွာခံစားသိမြင်လာပြီး၊ အပြုအမူအပြောင်းအလဲကိုပြီးနောက်၌ပင်ခံစားရလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဘီယာတစ်ခွက်။ ငါမကြိုက်ဘူး၊ ငါအရက်လုံးဝမသောက်ဖို့စဉ်းစားနေတယ် တူညီသောအခြေအနေမျိုးတွင်မည်သူမဆို? ငါအရက်အလွန်ပညာရှိဖြစ်လာခဲ့သည်ပါပြီ
တစ် ဦး ကပြန်လည်ဖြေဆိုချက်: ဟုတ်ကဲ့၊ တူညီတဲ့အရာ၊ ငါသောက်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုငါမပျော်တော့ဘူး။
နောက်ထပ်အဖြေ - NoFap ကိုစတင်သတ်မှတ်ပြီးနောက်အရက်သောက်သုံးခြင်းကိုငါလျှော့ချခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သောက်ခဲ့စဉ်ကအလွန်မူးနေပြီးငရဲမှတွန်းအားများနှင့်အတူအလွန်တရာမှေးမှိန်လာသည်။ ဒီနှစ်မှာငါပြန်ဖြစ်ခဲ့တာတွေအားလုံးဟာအရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းမှဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချပြီးသည့်နောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်အချိန်များနှင့်ရက်နာမှုနည်းသော၊ အချိန်ကာလတစ်ခုကိုအရက်မသောက်ဘဲလုံးဝဖြတ်သန်းရန်စဉ်းစားခြင်း။
အသက် ၂၃ - ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးအချိန်၊ အပျိုစင်မဟုတ်တော့ပါ
အသံသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီးနီးပါးစွမ်းအားကြီးမားသည်။ ငါအခုအရူးခန္ဓာကိုယ်အပူရှိတယ်, နက်ရှိုင်းသောအတွင်းရှိတစ် ဦး ရှိနေခြင်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ရှင်းပြဖို့ခက်ပေမယ့်မင်းသိတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်နေလို့လား မင်းသေသွားပြီဆိုရင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအေးလာတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာငါဟာငါကိုယ်တိုင်ကထွက်လာတဲ့အနုပညာခံစားမှုကိုခံစားရတယ်။ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်းလည်းမရှိ၊ အလွယ်တကူဖျားနာခြင်းလည်းမရှိ၊ ကျွန်ုပ်၌ခွန်အားလည်းပိုသည်။ ဆံပင်သည်ထူ။ ပျော့ပြောင်းပြီးမုတ်ဆိတ်တွင်အပြည့်အဝကြီးထွားလာသည်။
ငါ ၈ ရက်ပေါ့။ ငါဘယ်တော့မှအာရုံမစိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုသတိပြုမိလာတယ်။
ငါအများကြီးမနာသီချင်းဆိုခြင်းနှင့် psalmody လိုခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ငါငါ့စကားသံအတွက်ကြီးမားသောမကိုက်ညီသတိပြုမိသည်။ တစ်ချိန်ချိန်ငါသိသာငါ၏အအသံကွိုးအာဏာကင်းမဲ့မယ်လို့ငါရှင်းလင်းပြတ်သားကင်းမဲ့လိမ့်မယ်။ အဖြစ်ကောင်းစွာငါအနိုင်နိုင်ထက်ပိုတစ်ဆယ်ဒုတိယထိုသို့ကျင်းပရန်နိုင်ရှိရာအမှတ်, ကြောက်မက်ဘွယ်သောအသက်ရှုစီမံခန့်ခွဲမှုရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီနောက်ဆုံးသုံးရက်ကငါလျစ်လျူရှုလို့မရတဲ့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောသီချင်းတစ်ပုဒ်သာမဟုတ်ဘဲအတင်းအကျပ်မပြုဘဲပိုမိုမြင့်မားသော (သို့) အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်နိုင်သည်။ သဘာဝကျကျစီးဆင်းတယ်။ နှင့်အထင်ရှားဆုံးသောအချက်မှာငါသီချင်းဆိုနေစဉ်ယခုပင်ကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုဤမျှလောက်ကြာအောင်စီမံနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၄၀ စက္ကန့်အမှတ်အသားသို့ရောက်နေသည်။
အဘယ်သူမျှမ FAP ဖို့တစ်ခုခု, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုစကားသံကို fapping အကြောင်းကိုတစ်ခုခုကျိန်းသေရှိပါသည်။
NoFap များ၏အများစုမှာသှယျဝိုသေး Amazing အကျိုးကျေးဇူး
၎င်းသည်မည်သူမျှမပြောခဲ့သည့်အင်အားကြီးမားဆုံးစွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါမြှားကဲ့သို့ဖြောင့် pissing နေပါတယ်။ လေးနက်စွာငါရေချိုးခန်းထဲမှာ Legolas နဲ့ Chris Kyle ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ငါကကြမ်းပြင်ကိုနှိပ်ကြောင့်စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တွေမှာ pisses ယူပါတယ်။ အလေးအနက်ထားဤ nofap ၏နံပါတ် 1 အကျိုးအတွက်အဖြစ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
အသိပေးစာပိုမိုနက်ရှိုင်းနက်ရှိုင်းသောစကားသံ .. ..
အရမ်းနက်ရှိုင်းလွန်းလို့ကျွန်တော့်ရည်းစားက“ မင်းဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနေတာလဲ” ဟုငါ့ကို ဆက်၍ မေးနေသည်။ မြေအောက်ရထားပေါ်မှာအသားညှပ်ပေါင်မုန့်လုပ်နေတုန်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်က“ ၀ မ်းနည်းပါတယ်၊ ငါနင့်အသံကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမမျှော်လင့်ဘူး” လို့ပြောတယ် ငါကအပျိုဖော်ဝင်တာနဲ့တူတာမျိုးကိုဖြတ်သန်းသွားရလို့မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၁ နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ် ၁၄ နှစ်နှင့်တူသောအခါကျွန်ုပ်၏အသံပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပါသည်။ ငါအပျိုဖော်ဝင် 21 ပတ်ပတ်လည်ရိုက်တာနဲ့တူရဲ့! ဟားဟား။
ငါ NoFap (အနည်းငယ် relapses တှေရှိခဲ့တယျသျော) စတင်အစဉ်အဆက်ကတည်းကလမ်းလျှောက်နေစဉ်ကျွန်မပိုပြီးတည်ငြိမ်ရေးခံစားရတယ်။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့၊ ငါပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းနောက်နေ့ကျတော့အရင်နေ့ထက်အားနည်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ လမ်းလျှောက်သည့်အခါလက် - မျက်စိညှိနှိုင်းမှုသည်ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီးအနည်းငယ် ပို၍ တည်ငြိမ်သည်။ အဲဒါမင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းလို့ငါမထင်ဘူး။
ကလူအများကြီး pornfree သွားကတည်းကငါ့စကားသံကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပြီကြောင်း commented ပါပြီ။
ငါကြိုက်တယ်၊ မကြာခဏဖုန်းပြောရင်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကို 'မေ' လို့ခေါ်တဲ့အရာအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုတဲ့အချိန်တွေမှာ - ငါ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်တဲ့အကျင့်ကိုရပ်လိုက်ကတည်းကငါမရ ဒါကနှင့်အခြားသူများကိုငါ့အသံပိုမိုနက်ရှိုင်းဖြစ်ခြင်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ပါပြီ။
Long ကပုံပြင်တိုတို: ACL ကိုဆုတ်။ , 75 အတွက်ဖယ်ရှား meniscus ၏ပြန်လည်ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် 1999% ရှိခဲ့ပါတယ်။ အစဉ်အဆက်ကတည်းကငါ့အဒူးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ရွေ့လျားမှု, နာကျင်မှု, အရည်တည်ဆောက်-Up ၏အနာ, ခိုင်မာသော, ရောင်ရမ်း, လျှော့ချအကွာအဝေး, etc စတာတွေ
ကောင်းပြီ, မပို။ ဒူးနာကျင်မှုမရှိဘဲအပြေးခြေထောက်ပုံနှိပျ / extension များ, ကီထိုင် / နက်ရှိုင်းသောဒူးကွေး, quadricep ကိုဆန့်: အမှုအရာကိုယ်လုပ်ဖို့နိုင်တော့မည်မဟုတ်လေ့ရှိတယ်။ ဈယခုစုစုပေါင်းလွယ်ကူခြင်းနှင့်ဒူးသက်သာခြင်းနှင့်လုပျနိုငျသောအရာ: ဒူးနာကျင်မှုမရှိဘဲအပြေးခြေထောက်ပုံနှိပျ / extension များ, ကီထိုင် / နက်ရှိုင်းသောဒူးကွေး, quadricep ကိုဆန့် (နေရာတိုင်းအခြားနာကျင်မှု, ဒါပေမယ့်မဒူးအတွက်) ။
ဤအရာသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မပြောပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ cortizone ထိုးဆေးတစ်ခွက်လောက်သောက်ခဲ့ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ဒူးကဆိုးနေလို့အထက်ပါဖော်ပြချက်တွေကိုလုပ်ခြင်းကနေလမ်းလျှောက်လို့မရဘူး။
[မှတ်ချက်ပေးရန်စာတင်ပါ] သင်၏ဒူးကိုတိုးတက်စေရန်အကြံပြုခြင်းသည်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အဆစ်တွေတော်တော်များများမှာနာကျင်မှုခံစားရတယ်။ အားကစားရုံမှာအားစိုက်ထုတ်ရတဲ့တံတောင်ဆစ်တွေဖြစ်တယ်။ နှစ်နှစ်လောက်ကြာတယ် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် pmo no မပါ ၀ င်သောနာကျင်မှုပျောက်ကွယ်သွားပြီး gf အသစ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်လွန်ခဲ့သောတစ်ချိန်ကပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ငါရံဖန်ရံခါယခုသာအော်ဂဇင်။ ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲ၊ ငါလက်ခံလိုက်တာပဲ🙂
14 Days No Fap - ဝက်ခြံကို NoFap ဖြင့်တားခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်သိပ္ပံ
ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ပတ်ကို 3-4 ကြိမ် fap ။ ငါကအများကြီးဖြစ်စဉ်းစားဘူး။ ဒီနေရာမှာမင်းတို့ထဲကများစွာသောလူတို့သည်နေ့စဉ်အကြိမ်ကြိမ် fap လုပ်လေ့ရှိကြသည်ကိုငါဖတ်ခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကကျန်းမာတဲ့အပြုအမူလို့ကျွန်တော်အမြဲထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါကဝက်ခြံကိုအထောက်အကူပြုတယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကဝက်ခြံပေါက်တာမဖြစ်စေဘူးလို့ဆေးပညာရှင်တွေရဲ့ယူဆချက်အောက်မှာအမြဲရှိနေတယ်။ ငါပိုဖတ်နှင့်နောက်ထပ်သုတေသနလုပ်ခဲ့တယ်အဖြစ်သို့သော်, ငါကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများနှင့်သို့ရာတွင်အတွေ့အကြုံများအနေဖြင့်အပိုင်းပိုင်းအတူတကွထားဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဝက်ခြံကို“ ဖြစ်ပေါ်စေ” မည်မဟုတ်ပါ၊
ငါသည်ငါ့သီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဖို့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ် NoFap စိန်ခေါ်မှုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးပါ4ရက်နေ၏။ အကြှနျုပျ၏ဒုတိယပါ5ရက်နေ၏။ အခုတော့ကျွန်မနှစ်ပေါင်းများစွာ ဝင်. ထားသောအရှည်ဆုံးသောငါ၏ 14th နေ့, သို့သွားနေပါတယ်။
ဤတွင်စိန်ခေါ်မှုသော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရေးအထီး ejaculating ရပ်သည့်အခါ, သူ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ဟာ 6th တစ်နေ့တာအတွင်းအကြီးအကျယ်တက်နှုန်းကိုမြင့်တက်နှင့် 7th နေ့၌ peaking မညျဖွစျကွောငျးပြသခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအထွတ်အထိပ်သင်၏ပုံမှန်အဆင့်ဆင့်ထက်အကြောင်းကို 50% ပိုမိုမြင့်မားစေနိုင်ပါတယ်။
ငါ၏အ 6th နှင့် 7th နေ့ရက်တွင်, ငါ့မျက်နှာကိုမရဏာနိုင်ငံ၏တံခါးများကဲ့သို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အများအပြားကသွေးထွက်သံယို cyst တက် လာ. ငါ့ကိုအိမ်တွင်းတနေ့လုံးနေချင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူတို့ကနာကျင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်အမာရွတ်များထွက်ခွာနေကြသည်။
သို့သော်အလင်းကြောင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆုံးတွင်ရှိ၏။ ယခုအပတ်တလျှောက်လုံး, ငါ့အရေပြားကိုအံ့ဖှယျနညျးသိသိသာသာပိုကောင်းလာတာတော့သိရသည်။ ငါချွေးရာသီဥတုပိုမိုကြောင့်အများကြီးခဲ့ကြပြီ။ ငါကပိုကျန်းမာရေးအန္တရာယ်နှင့်အဆီပြန်သောအစားအစာများစားသုံးခြင်းပါပြီ။ ကြောင်းနေသော်လည်းငါ့အရေနေဆဲငြိမ်းစေလျက်နှင့်ခြိုးဖောကျမပေးပါ။ ငါ Accutane ကတည်းကဤကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုမြင်ကြဖူးဘူး။ အသီးအသီးချွေးစေးတစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာငါအသစ်တစ်ခုကိုနာကျင် cyst တက်မလာဘဲကြောင်းကျော်လွန်အံ့သြသွားမိပါတယ်။
ငါငါ့အလိုရှိသမျှသီအိုရီစစ်မှန်တဲ့လာမယ့်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပါ၏။ NoFap ငါ၏အဝက်ခြံများအတွက်ဖြေရှင်းနည်း၏ပဟေဠိ၏နောက်ဆုံးအပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာကျွန်တော်အကြံပြုထားတဲ့ဖြည့်စွက်ချက်များစွာရှိပါတယ်။ ငါလပေါင်းများစွာကသူတို့ကိုအသုံးပြုကြပြီးသူတို့ကကူညီပေးပါတယ်။ NoFap ၏ရလာဒ်များအားလုံးသည်ပေါင်းစပ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။
* ၁) Saw Palmetto - ၅ alpha reductase ကိုတားဆီးစေသောသဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်
* 2) လက်ဖက်စိမ်းမှထုတ်ယူသောအရာ - testosterone ဟော်မုန်းပမာဏလျှော့ချရန်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု
* 3) Zinc - ဟော်မုန်းညီမျှမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်။ သွပ်ကိုလည်းသုတ်ရည်နှင့်အတူကုန်ခမ်းနေသည်
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အရှည်လျားဆုံးသောရပ်တည်မှုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဝက်ခြံသည်လွန်စွာရှင်းလင်းသွားပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်မျက်နှာကလုံးဝရှင်းနေပြီးနောက်ကျောက ၉၅% လောက်ပိုကောင်းတယ်။ ဒီမသန်စွမ်းမှုမတိုင်ခင်မှာကျွန်မဟာအသက် (၂၆) နှစ်အရွယ်အထိဝက်ခြံထွက်တာတွေရှိခဲ့ပြီး accutane နဲ့ proactive လို hardcore ပစ္စည်းတွေနဲ့သာအောင်မြင်မှုရခဲ့ပါတယ်။ permalink
ငါ PMOing ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါအများကြီးပိုပြီးယားယံလေ့ပေမယ့်သုံးပတ်လောက်ကြာပြီးနောက်ယားယံခြင်းမှရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ယေဘုယျခြောက်သွေ့မှုလျော့နည်းသွားသည်။ အထက်တန်းကျောင်းကတည်းက (အခုအသက် ၂၂ နှစ်) ကတည်းကမကောင်းတဲ့နှင်းခူတစ်မျိုးရှိခဲ့ဖူးပြီးငါ့ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေပေးခဲ့တာကတော့ nofap ပါ။
ကျွန်တော်အရှည်ဆုံး nofap အစုံလိုက်ပါ ငါကောင်တာကိုရှောင်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ရက် ၂၀-၃၀ လောက်မှာဖြစ်ရမယ်။ ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများအားဖြင့်သဘောကျမိပါတယ်။ ၂၆ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရင်ဘတ်ဆံပင်ကိုရိတ်နေပြီးကျွန်ုပ်မျက်လုံးများတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာသည်။ သူတို့ဟာအစိမ်းရောင်တောက်တောက်ကြီးထွားလာပြီး“ အိတ်များ” (မျက်လုံးအောက်အနက်ရောင်အစက်များ) ဟာအချို့သောထောင့်များမှမြင်နိုင်တဲ့အထိပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက်လျှင်ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုအားလုံးဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။ ယနေ့ငါအမျိုးအနွယ်၏ပင်လယ်၌နိုးနှင့်ငါလုပ်ခဲ့တယ်ပထမ ဦး ဆုံးမှန်မှရေကူးခဲ့သည်။ အားလုံးရှိနေဆဲပဲ။ 😀
ငါခဏတာအော်ဂဇင်မလုပ်ရင် ၁ လ ၁ ပတ်လိုငါ ၃၀% ပိုပြင်းပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါငါနာကျင်မှုမခံစားရဘူး။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရန် ၃-၇ ရက်ကြာပြီးနောက်တွင်လည်းဤအရာသည်ဖြစ်ပွားသည်။ ကျွန်ုပ်ပုံမှန်လုပ်သည့်အလုပ်များထက် ၁% မှ ၁၅% အကြားပြင်းထန်မှုကိုသာပြုလုပ်သည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်သာလျှင်အလုပ်လုပ်သည်။ ငါမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံလျှင် - ငါကံကောင်းပါစေ၊ ငါသည်အခြားနေ့တိုင်း၌ရှိသည် - ဆိုပါစို့၊ ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန်ပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာကိုစွဲမြဲစွာကျင့်သုံးပါကလေ့ကျင့်ခန်းလွန်။ နာကျင်မှုမရှိပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အကယ်၍ relapse ကတစ်ပတ်လျှင် ၄ ကြိမ်မှ ၇ ကြိမ်ထက် ပို၍ ပြောပါက၊ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လျှင်တောင်ကျွန်ုပ်သည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းမှနာကျင်မှုခံစားရသည်။
ဗြဲ STIIIIIIINK ။ MY တွင်းမွှေးကြိုင်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကောင်း။ သူရဲနံ။ ဒါဟာထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဤဈပြန်လည်နာလန်ထူဖို့လမ်းအပေါ်နှင့်အတူ ok ထက်ပိုဖြစ်ကြောင်းကိုတဦးတည်းအားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖြတ်ခံခဲ့ရခြင်းမပြုမီ, ဈ, အထဲကအလုပ်လုပ် 2-3 နေ့ရက်ကာလအဘို့တူရှပ်အင်္ကျီပြန်သုံးကနံရှိသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်အခုကသဘာဝဖြစ်စဉ်များ (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး endocrine) Reboot လုပ်သွားကြပုံပေါ်သို့မဟုတ်စတင်ခဲ့ပါပြီနိုင်ဘူး။
အကြောင်းမရှိ telogen effluvium pmo နိုင်ပါတယ်
ကိုယ်သွန်းလောင်းဘဲသေရှာဖွေနေဆံပင်နှင့်အကြွပ်ဆတ်လက်သည်းနှစ်ဦးစလုံးရှိခြင်းခံခဲ့ရ diagnised ခဲ့ပြီးယခု2နှစ်ပေါင်း telogen effluvium ရှိခဲ့တယ်။ ယခုဈကိုလည်းသွန်း, လက်သည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်နှင့်ဆံပင်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်, nofap အတွက်2လအတွင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလုံးဝနီးပါးယခုသို့သော်အဘယ်သူမျှမသိသာပေါကျ, (ဈ 20-2 ဆံပင်ဖို့ငါ့ဆံပင်အားဖြင့်, ငါ၏လက်ချောင်းများကို run တဲ့အခါမှာ4ဆံပင်န်းကျင်ဆုံးရှုံးထံမှ) သွားပြီ
Dyshidrotic နှင်းခူ (လက်ချောင်းထိပ်ပေါ်သေးငယ်တဲ့အရည်ကြည်ဖု) နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ?
ငါ dyshidrotic နှင်းခူရောဂါကိုငါ့လက်၌ခံစားနေရပြီး Tis cure အတွက်အမျိုးမျိုးသောဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် clobestasol မုန့်တို့ကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ အချို့သောအချိန်များအတွက်ပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ပြန်ပေါ်လာသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်၎င်း၏ကုသမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏အလွန်အကျွံအလေ့အကျင့်သည်နှင်းခူရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ဒီတော့ယောက်ျားတွေ၊ မင်းက Dyshidrotic နှင်းခူရောဂါခံစားနေရရင်ယောက်ျားတွေဟာမပျော်ဘူး၊ ပျောက်လည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်🙂
တိုးတက်မှု, ထပြသနိုင်ဖို့အဓိကအားငါ့အစွမ်းသတ္တိကိုစတင်နေကြသည်။ ငါ့လက်ချောင်းကြောင့်စွမ်းအင်မရှိခြင်းအထိလှုပ်ရှေ့မှာစောင့်နေရတဲ့အခါ, ငါ့လက်ချောင်းကပို steadier နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်လာကြပါပြီ။
ငါမှာပြproblemနာမရှိဘူး၊ တစ်ခါတလေကြည့်ဖူးတယ်၊ တစ်ပတ်ကို ၂၀ မိနစ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့ပြproblemနာရှိခဲ့တယ်။ ညမှာအိပ်ပျော်သွားဖို့စိတ်ဖိစီးမှုအဖြစ်တစ်ရက်ကိုစတင်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်။ ယခုငါ ~ ၂ လအကြာ (၁၂ ရက်ကြာအရှည်ဆုံး ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အတော်များများ) ပြီးနောက်ငါဘယ်တော့မှပြန်လာမည်မဟုတ်ကြောင်းငါသိ၏။
ကျွန်ုပ်၏ 'အရွယ်ရောက်ပြီးသူ' ဘဝတစ်လျှောက်လုံး (ကျွန်ုပ်သည် ၁၂ နှစ်အရွယ် မှစ၍ ယခုတိုင်အောင် - ၂၃ အခြေခံအားဖြင့်) တကယ့်ကိုပျော်ရွှင်မှုခံစားရပုံကိုတောင်မသိခဲ့ပါ။ ငါတကယ်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်နှင့်သာပျော်ရွှင်သင့်သည်ထင်ပြီးကျန်ကျန်တဲ့ကျန်အချိန်များ။ ကျွန်မမှာစိုးရိမ်စိတ် / လူမှုရေးပြproblemနာရှိတယ်ဆိုတာတောင်မှမသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာပျော့ပျောင်းပေမယ့်တော်တော်လေး shitty ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါထင်တာကငါဘယ်သူလဲဆိုတာပဲ။ ငါတို့အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာလို့ထင်ရမယ်၊ ကံကောင်းချင်တော့ငါအခုသိပြီ၊ နောက်ကျလို့မရဘူး
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားဝက်ခြံနှင့်အတူကူညီပေးခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဝက်ခြံအနည်းငယ်ရှိသော်လည်းပြhadနာတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ငါသုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကငါ့ကိုအပြည့်အဝမကူညီခဲ့ဘူး။ အခုကျွန်တော့်အရေပြားဟာဘာမှအသုံးမပြုဘဲလုံးဝရှင်းသွားပြီ
သန့်ရှင်းသောဘုရား shit ။ ဝက်ခြံပျောက်ကုန်ပြီ?
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး NoFap ကိုလက်ရှိ ၇ ရက်တာအချိန်တွင်ရှိသည်။ ငါ့မျက်နှာမှာဝက်ခြံအချို့ရှိနေတယ်၊ ​​ငါမသေချာဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်ပါတ် nofap ပြီးနောက်မှာဝက်ခြံအရမ်းလျော့လာတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်မှုမြှင့်တင်ရန်! ငါထင်တာကငါဟာ shitload ရေကို ၂ ရက်တခါသောက်ပြီးစတင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ပါ။
ငါပြန်လာပြီးနာရီအနည်းငယ်အကြာမှာရင်ဘတ်ပေါ်ကဝက်ခြံထွက်လာတာကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်။ အသားအရေကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် nofap အကြားဆက်စပ်မှုနှင့်ချက်ချင်းပင်ခန္ဓာကိုယ်တုန့်ပြန်မှုတို့ကိုကျွန်တော်သေချာပေါက်သတိပြုမိသည်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီး၊ nofap ကို ၁၀ ရက်ကဲ့သို့လုပ်သောအခါတိုင်းကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ငါအလွန်အကျွံချွေးမဟုတ်တော့ဘူး, ငါ့အသားအရေအများကြီးပိုကောင်းလာတယ်နှင့်ငါဝေးပိုပြီးအပြင်ထွက်ဖြစ်၏။ အဲဒါရှင်းပြလို့ရမလား ကျွန်တော့်ဝက်ခြံဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ငါရှောင်ကြဉ်သောအခါ, ငါရှင်းပါတယ်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အနေဖြင့်နောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်မျက်နှာသည်အရောင်တောက်တောက်ဖြစ်သွားပြီးအရူးကဲ့သို့သောချွေးထွက်နေသည်။
နေ့ 15 မျက်နှာဝက်ခြံ Gone
ကျွန်တော့်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံး (အပျိုဖော်ဝင်ချိန် မှစ၍) ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာပေါ်တွင်ဝက်ခြံများရှိခဲ့ဖူးသည်။ အခုတော့ငါ NoFap စတင်ခဲ့သည်။ နေ့0ငါမျက်နှာ၌ ၅-၆ မျက်နှာ၌အဆက်မပြတ်ရှိခဲ့သည်။ နေ့ ၁၅ ရက်သူတို့ ၉၅% သွားသည်ကိုသတိပြုပါ။
ငါတူရလဒ်များကိုခဲ့ .. ငါ့အသီအိုရီက testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ဒါက testosterone မဟုတ်ဘူး။ NoFap သည်တစ်ပတ်အတွင်းခဏတာခဏတာ မှလွဲ၍ ၎င်းကိုသိသိသာသာမတိုးစေနိုင်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်တစ်စုံတစ်ရာသောကြောင့်ရလဒ်များနှင့်ငြင်းခုန်။ မရပါ။
ရှိသမျှတို့ကိုငါက၎င်း၏ကယ့်ကိုသေးငယ်တဲ့အချိန်မှာဝက်ခြံရရှိလျှင်လည်းဒီအားအတည်ပြု, ငါ့မျက်နှာကိုချောမွေ့ဖြစ်လာသည်နှင့်။ ယေဘုယျအားငါ့အရေပဲ 12 ရက်အကြာမှာပိုကောင်းလှပါတယ်။
ငါ (ရုံ scars) ငါ့မျက်နှာပေါ်ငါ့မျက်စိနှင့်မျှမတို့ဝက်ခြံအောက်မှာလျော့နည်းအိတ်ရှိသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ပြေးသောပုံမှန်အပြေးသမားတစ် ဦး အနေဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသည်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုပြောနိုင်သည်။ ငါ၏အပြေးသည်မည်သို့၎င်း၏ညဉ့်နေ့နှင့်။ ငါအရင်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ရင်ငါ့ခြေထောက်တွေကအရမ်းကြီးပြီးတစ်နည်းနည်းနဲ့နှေးနေတယ်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေမလုပ်ဘူးဆိုရင်၊ သင်၏ပေါင်ခြံနှင့်အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိစွမ်းအင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခု ... သငျသညျချွတ်လူရှုပ်သောအခါ, တစ်နည်းနည်းနဲ့သင်အဲဒီမှာငရဲကဲ့သို့အားနည်းဖြစ်လာသည်။ permalink
Ber သဘောတူသည်။ ဤနေရာတွင် Runners ။4လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှင့်ငါ၏အပြေးအပြေးပြိုင်ပွဲ Started ငါရေကူး AMD စက်ဘီးအတွက်မိုင်ထားရန်ရှိသည်နှင့်အမျှဤအကြောင်းအဘို့ဆင်းသွား၏။ ဤနှစ်တွင်အစဉ်အဆက်အကြှနျုပျ၏အကောင်းဆုံးပြေးတစ်နှစ်ဖြစ် projected ဖြစ်ပါတယ်။ ငါရှည်လျားနာရီစကိတ်စီးပြေးရေကူးအလုပ်လုပ်သောဤမျှလောက်စွမ်းအင်ရှိသည်။ NoFap တစ်အံ့ဖွယ်ပါပဲ။ တစ်ဦး 33 နေ့က Streak အတွက်ပဲ Lil လိင်တှေ့ဆုံနှင့်အတူခက်ခဲဘုန်းတော်ကြီး mode ကိုအပေါ်ဖြစ်၏။ အပေါ်ကြားတွင်ပြိုင်ပွဲနေ့ကသေးပါဘူးတဲ့ 120 အဘို့အဘယ်သူမျှမ Pmo အော်ဂဇင်သို့မဟုတ်ဘာမှပေါ် Am
ခဏလောက်အစာမစားတဲ့ခြင်္သေ့ကိုရှာပြီးမင်းမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်။ ငါတိုက်ပွဲမတိုင်မီခြောက်ပတ်အဘို့အသုက်မ။ လိင်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ တင်းမာမှုအလွန်များလွန်းတယ် ၎င်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်သည့်ဓာတ်သတ္တုများနှင့်အာဟာရဓာတ်များစွာကိုထုတ်ပေးပြီး၎င်းတို့အားဈေးပေါပေါဖြင့်ထုတ်လွှတ်သည်။ ဖြန့်ချိဒူးနှင့်သင်၏ခြေထောက်အားနည်းနေသည်။ ခဏလောက်အစာမစားတဲ့ခြင်္သေ့ကိုရှာပြီးမင်းမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့ဆီမှယိုမလောင်းရဘူး။ ကျွန်မအိပ်နေချိန်တောင်အိပ်မက်ထဲမှာမိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးရှိနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုငါလာမယ့်သီတင်းပတ်မှာရန်ဖြစ်မယ်၊ ငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ ငါမလုပ်နိုင်ဘူး 'ဆိုပြီးပြောတယ်။ အဲဒါထိန်းချုပ်မှုပဲ။ ငါတဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်ကတည်းကလုပ်နေခဲ့ကြပြီ။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါဟာဘယ်သူလဲဆိုတာပဲ။ ဒီနည်းနည်းလေးစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုတွေကြောင့်ပဲ။ ငါ့ကိုယဇ်ပူဇော်သောအခြားလက်ဝှေ့သမားတစ် ဦး ကိုရှာပြီးမင်းနောက်ချန်ပီယံတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ” Semen retention (ဟောင်းများကမ္ဘာ့ဖလားဟဲဗီးချန်ပီယံ) ရက်နေ့တွင်လက်ဝှေ့သမားကိုဒါဝိဒျ Haye ။
nofap ၏ 40 ရက်ပေါင်း
ကျွန်မအကြိမ်ပေါင်းများစွာ nofap ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကိုယ့်နေ့ရက်ကို 40 အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကို, ကိုယ့်ခြားနားချက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ငါ့အရေကျန်းမာရှင်းပါတယ်။ ငါ့ဆံပင်ကဆြုံးတော့ဘူး။ ငါ့ဆံပင်ထူခြင်းနှင့်အရည်အသွေးပိုကောင်းဖြစ်လာနေသည် infact ။ ကိုယ့် hairline သည်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့လေသည်။
ဖြည်းဖြည်းချင်းလာဘ်တိုးနှင့် PMO ၏ဆိုးကျိုးများကိုလျှော့တွက်သို့လှည့်ဖြားခံရ။ နှင့်သိုင်းရွိုက်အကြောင်းကိုနည်းနည်းတစ်ခုခု
ကျွန်ုပ်တွင်မိသားစုတွင်လည်ပတ်နေသည့်သိုင်းရွိုက်မူမမှန်မှုများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် hypo ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဟိုက်ပါပါရောဂါလက္ခဏာမပြသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံ hypothyroidism ၏လက္ခဏာများကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီး၊ ငါ၏အသိုင်းရွိုက်ပျှမ်းမျှထက်အတော်လေးသိသိသာသာသေးငယ်ကြောင်းပြောသည်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်ဆိုလိုသောအချက်မှာကျွန်ုပ်သည်သိုင်းရွိုက်ပြissuesနာများရှိသူများသည် PMO ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုသက်ရောက်စေနိုင်ပြီး၎င်းအားဖြတ်တောက်ခြင်းသည်သူတို့၏သိုင်းရွိုက်ပြmostနာအများစုကို (အားလုံးမဟုတ်ပါ) ဖြေရှင်းနိုင်သည် - ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောလပေါင်းများစွာကကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်များမှာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ငါ NoFap ~ 3months အဘို့သွားသောအခါ (ကောင်းစွာစာသားမဟုတ်, ငါမူကားဤကာလအတွင်းအကြိမ်အနည်းငယ်သာ relapse နှင့် P ကိုလုံးဝဖြတ်ခဲ့) ။
ကြောင်း Streak ၏အဆုံးဆီသို့, ငါ '' ပုံမှန် '' ခံစားခဲ့ရ - ပေါ့ပေါ့တနျဖိုးကိုယူ။ နှင့် PMO သဘောတူညီချက်၏ကြီးမားသောမဟုတ်ပါဘူး - ငါ့အလက္ခဏာတွေပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး - စိုးရိမ်ပူပန်မှု, ပျို့ချင်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ခြင်းအများဆုံးကြောက်စရာသူတွေကိုအားလုံးစတင်ခဲ့ ငါအပြည့်အဝလွပြီးနောက်ပြန်လာလာမယ့် PMO သို့ရောက်ကြ၏။ သို့သော်ရောဂါလက္ခဏာများ၏အကြောင်းရင်းကိုအတိအကျအတိအကျတိတိကျကျပြောရန်မလွယ်ကူပါ။ အကြောင်းမှာ A) nofap သည်အကျိုးသက်ရောက်ရန်အချိန်ယူရပြီး၊ တစ် (သို့မဟုတ်) နှစ် (၂) နှစ်အကြာတွင်အပျက်သဘောဆောင်သောလက္ခဏာများပြတ်တောက်မည်ဟုသင်မမျှော်လင့်နိုင်ပါ။ NoFap မိမိကိုယ်မိမိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်တိုးတက်မှုများစွာရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်ဖြစ်နိုင်ချေထက်ပိုမိုကောင်းမွန်နေဆဲဖြစ်သည်။ (ဂ) ထိုအချိန်တွင် PMO သည်ကျွန်ုပ်၏သုခချမ်းသာကိုသိသိသာသာထိခိုက်မှုမရှိဟုအခိုင်အမာယုံကြည်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီအရာအားလုံးကကျွန်တော့်ကိုရှုပ်ထွေးစေပြီး PMO ဟာကြီးမားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး (အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်း၊ အရှက်ကွဲခြင်းများ မှလွဲ၍) သည်ထိုအပျက်သဘောဆောင်သောခံစားချက်များကိုမည်သည့်နေရာမှမှပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိပါ။ ငါ PMO ကိုရှောင်ကြဉ်စဉ်ငါ၌ "စူပါပါဝါ" မခံစားရဘူးသောကြောင့်, ဒါကြောင့်ငါ့ကိုအများကြီးနာကျင်မဟုတ်ကြောင်းဆိုလိုရမယ် ငါပိုပြီးမှားမဖြစ်နိုင်ဘူး အပြုသဘောဆောင်သောအပြောင်းအလဲများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာဖွေရမည်ကိုအတိအကျသိသောအခါယခု (၈) ရက်အကြာမှရှောင်ကြဉ်ပြီးနောက် PMO ကိုလွန်ခဲ့သော ၃ ပတ်ကမှ စ၍ အလွန်ကန့်သတ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ၆၂ ရက်ပတ်လုံး ၀ င်ရောက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဗိမာန်တော်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဆံပင်အချို့ထူလာသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီ။ လွန်းထုတ်ဖြောင့် Hairline ။ နေ့ရက်များအတိုင်းသွားသည်နှင့်အမျှပိုမိုရလဒ်များအတွက်မျှော်လင့်ခြင်း။ permalink
ငါ့မှာဝက်ခြံပေါက်တာကြာနေပြီ၊ သက်သတ်လွတ်သမားတောင်မှပျောက်သွားအောင်လုပ်ဖို့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာဘာကိုကုသပေးခဲ့တာလဲခင်ဗျားသိလား။ NoFap ။ ဒါဟာရက်ပေါင်း 35 ပတ်ပတ်လည်ကယ့်ကိုရှင်းလင်းဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် linear ဖြစ်စဉ်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ရံဖန်ရံခါအလွန်သေးငယ်သောချိုးထွက်မှုများရှိသော်လည်း၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်မရှိတော့ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်မှုမြှင့်တင်ရန် !! လင့်ခ်
ငါ nofap, ပြန်ရောက်သွားတယ်နှင့် binged, ဆံပင်နောက်တဖန်ထွက်ကြွလာခဲ့ပါဘူးသည့်အခါငါ့ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်သတိပြုမိသည်။
ငါ့စိတ်ဓာတ်ကျတာပြန်လာပြီ၊ အဲဒီအချိန်ကစပြီးကျမအစားအသောက်ကျဆင်းလာတာကိုသတိပြုမိတယ်။ ကျွန်တော်အခု Nofap ကိုပြန်နေပါတယ် Fapping သည်မိနစ်အနည်းငယ်သာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စက္ကန့်အနည်းငယ်အော်ဂဇင်ပြုခြင်းနှင့်မထိုက်တန်ပါ။
ဒီနည်းကိုအစစ်အမှန် IS ။
ငါပြန်ရောက်သွားတယ်တဲ့ 13 နေ့က Streak, PMOed6ကြိမ်ပြီးနောက်ခြားနားချက်, အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်
ရဲအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအရေပြား, နက်ရှိုင်းသောအသံမြည်ခြင်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားကောင်းမွန်စွာပုံမျက်နှာ (High cheekbones, jawline.etc), နွမ်းခြင်းမရှိဝက်ခြံ, မှောင်မိုက်စက်ဝိုင်း, သွက်မျက်စိ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှာဖွေနေဆံပင်: RELAPSE မီ
RELAPSE ပြီးနောက်: မျက်စိအောက်မှာဝက်ခြံ, ဦးနှောက်မြူ, မှောင်မိုက်စက်ဝိုင်းနှင့်အတူစီးမှိုင်း Hyperpigmented အရေပြား, bitchy အသံမြည်ခြင်း, OCD, ကျမဲ့မျက်စိရှာနေပါးမာနထောင်လွှား။
ငါသည်ငါ့မိသားစုသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာတစ်ခုခုမှားယွင်းနေခဲ့လျှင်ဒီကိုမှန်ကန်မှာအားလုံးမဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ, ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ fucking ဖြစ်ပါတယ်, ငါ့အစ်ကိုကသူတည်းဟူသောငါ၏မိခင်ငါ့အရေသေံရှာဖွေနေအလွန်လိုက်တယ်ခဲ့ကြောင်းပြောတယ်, ငါ shit တူပြောတယ်, ငါ့ကိုမေးတယ်။
ရုံ 1 တစ်လအကြာတွင်ငါ့အရေအတွက်ခြားနားချက်, Nofap fuck ဆိုတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့အသကျရှငျအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ပြင်ကအနည်းဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များမှမရှိစေရန်တားဆီးခြင်းလေးစားမှုနှင့်အတူ, ထို hypersexuality, 22,23 မြင့်သောလိင် drive ကိုတစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်အဆင့်မြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းပါဝငျကွောငျးပေါ်လာပါဘူး။
ငါတနေ့ 3-5 ကြိမ် fap လေ့ရှိတယ်။ ငါဘယ်အချိန်မှာဘယ်အချိန်ရောက်နေတယ်ဆိုတာမသေချာဘူး (ရေတွက်တော့မယ်) ဒါပေမဲ့ ၄၅ ရက်အတွင်းမှာမအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ လိင်ဆက်ဆံမှုမှာအော်ဂဇင်တစ်ခုပဲရှိတာလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်က။ သို့သော်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Nofap မတိုင်မီကျွန်ုပ်ခြေထောက်များနှင့်လက်များပေါ်တွင်အနီရောင်၊ ယားယံခြင်း၊ အခုတော့မရှိတော့ဘူး၊ မင်းဒါကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူး။ အံ့သြစရာကောင်းတာကသုတ်ရည်မှာဗီတာမင်တွေ၊ အရာဝတ္ထုတွေအများကြီးပါဝင်ပြီးအဲဒါကိုစွဲမြဲစွာထားခြင်းကသင့်ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရုံပါပဲ။
ဒါကြောင့်ငါ noFap မစတင်မီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ / အသက်ရှုခြင်းပြissuesနာတွေရှိခဲ့တယ်။ မည်သည့်ပြcomplနာများအတွက်မဆိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်မှာကင်ဆာရောဂါရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဆရာဝန်တွေကဘာမှမရှာနိုင်ဘူး သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဆေးတွေပေးမယ်။ နောက်ဆုံးဆေးတွေမရှိသေးဘူး။ ငါဆေးတွေကိုမသောက်ဘူး။ ပြီးတော့ဆေးတွေကပြissueနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး၊ ရောဂါလက္ခဏာကိုသက်သာစေရုံသာမကငါငြင်းခဲ့တယ်။ ဒါဟာငါနောက်ပိုင်းမှာထွက်တွက်ဆရန်ရှိသည်မယ်လို့ထင်တစ်ခုခုပါပဲ။
သတင်းကောင်း: ရုံစုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ်အကြာအိုင်တီ UP ရှင်းလင်း! ငါ2နှစ်ပေါင်းအဘို့ဤကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့လေပြီတကား NOFAP ဗီတာမင် / အာဟာရ / သတ္တုဓာတ်ဤကျေးဇူးတင်စကားပါရှိသည်သောငါ၏သုက်ပိုးဆက်ပြီး / ရှိပါသလား? သေချာမ, ဒါပေမယ့်ငါကဒီအသစ်သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့အသက်ရှင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းပြီးနောက်တက်ရှင်းလင်းသိရန်နှင့်အစဉ်အမြဲငါကျေးဇူးတင်ပါ၏!
(ဒါ့အပြင်ငါ့လက်နှင့်ခြေနှင့်စောင်ရေပိုကောင်းဖြစ်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နှင်းဆီရှိပြီးငါပိုကောင်းကြမ်းတမ်းဆောင်းရာသီသည်းခံနိုင်သည်! နှင့်နောက်ဆုံး NO constant မျက်ရည်အေးမှငါ့သူကပြောတယ်မျက်စိကိုထုတ်ပြုတ်ကျ, AN မျက်ဒေါသခဲ့အရမ်းရယ်ရတယ်)
ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးယောက်ျားတစ်ယောက်ကို Boobs လုပ်ပြီးကုသပေးခဲ့တာပါ
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမသေချာမရေရာသောနံပါတ် ၁ မှာလူ Boob များဖြစ်သည်။ အ ၀ တ်အစားတောင်မ ၀ င်သေးဘူးဒါပေမယ့်အထက်တန်းကျောင်းနဲ့မီးယပ်ရောဂါခံစားခဲ့ရတဲ့အလယ်တန်းကျောင်းတွေအထိ။ ငါရပ်ပြီးကတည်းက testosterone ဟော်မုန်းကကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုညီညာစေတယ်။ ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်မိလို့နောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်။
မတ်လန်းကျင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများအတွက်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းမှခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါကလည်းငါသည်ငါ့နား၌လက်စွပ်တစ်ကွင်းအသံက (tinnitus) ခံစားစတင်ခဲ့သည့်အခါအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်, ငါ့ဘောလုံးအစဉ်ငါ့ခန္ဓာကိုယ်မှနီးကပ်လွန်းကျန်ရစ်နှင့်ငါ့ flaccid ဒစ်၏အရွယ်အစားမှာလည်းအလွန်သေးငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြောင်း, ငါသညျလညျးအကြှနျုပျ၏ပခုံးမှဆန့်တစ်ဦးကြီးမားသောဝက်ခြံပြဿနာခဲ့သာ။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်ပြဿနာများနီးပါးယခုပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ tinnitus ချရှေ့မှာဘာ၏ 20% ရန်ဖြစ်ပါသည်။ (ကျနော်ဇင့်ဖြည့်စွက်ယူပေမယ့်ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်အဖြစ်,) ဆံပင်, ပြန်ဝက်ခြံစိုက်ပျိုးထားပြီးငါ့အလိုရှိသမျှမျက်နှာနှင့်ပခုံးကနေပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။ ငါ့အရေသည်ယခုအခါအများကြီးပျော့ပြောင်းပြီးနှင့်နူးညံ့သောခံစားရ၏။
ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ
ငါသည်လူ Boob ခဲ့ဆိခဲ့ကတညျး * ကျနော်တဦးတည်းသွားလာရင်းအတွက် 50 pushups လုပ်နိုင်ပေမယ့်နေဆဲငါတကယ်အဆင်မပြေရင်ဘတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကကြီးတွေကိုကြည့်အောင်အောက်မှာဒါပေမယ့်၏ထိပ်ပေါ်မှာအဆီကြွက်သားရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကယခုငါ့ရင်ဘတ်ထှငျးသညျ, ပျောက်သွားပြီတကား
* နောက်ထပ်ဆံပင်နှင့်အပင်ထူနှင့်ခိုင်ခံ့သော။ ငါသည်ငါ၏ဆံပင်ယခုပြန်ဖြစ်ဟန်, ငါသည် balding ခဲ့သည်ထင်!
* ကြှနျုပျ၏မကျြနှာကိုတကယ်ပြောင်းလဲသွားပြီ! ငါမှန်ထဲမှာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါမတိုင်မီတူအဘယ်အရာထက်ခြားနားချက်တွေအများကြီးသတိထားမိ။